Pejy fomba sy torohevitra amin'ny fiteny vahiny
Tag: Fomba sy torohevitra amin'ny fiteny vahiny
Voambolana SOS: ahoana no hanombohana resaka amin'ny fiteny rehetra?
feh Tranquillus | Sep 20, 2021 | Ao amin'ny tranonkala |
Ny fianarana manomboka resaka amin'ny fiteny vahiny dia ilaina amin'ny voambolana. Betsaka ny fomba fiteny mba hahazoana antoka fa azonao, takatrao ary ataovy ilay resaka miaraka amin'ilay olona iray hafa. “Tsy azoko”, “azonao atao ve ny mamerina azy”, na koa hoe “inona no iantsoanao an'izany” dia fanehoan-kevitra tsotra ianarana izay hanampy anao haneho hevitra amin'ny teny Portiogey anglisy, Alemanina, Espaniola, Italiana ary Breziliana.
Fa maninona ary ahoana no hanombohana resaka amin'ny teny vahiny? ^
Ny fahazoana antoka fa takatrao tsara amin'ny mpiara-miasa aminao no fototry ny fitarihana sy fanombohana resaka amin'ny fiteny vahiny. Mandritra ny fitsangatsanganana any amin'ny firenena vahiny izay tsy anananao fibaikoana tsara ny fiteny, ny fahalalana an'ity voambolana ity dia mety hamonjy ain'olona amin'ny toe-javatra maro. Hahafantatra ny fomba hitenenana hoe "azonao atao ve ny mamerina azy?", "Inona no iantsoanao azy?" na “azonao ve aho?” tena afaka manampy anao hanazava ny toe-javatra miaraka amin'ilay olona iray ary hampahafantatra ny tenanao.
Mazava ho azy, ny fahalalana ny fomba hanombohana resaka dia tsy ampy hahazoana aina amin'ny toe-javatra rehetra. Ka raha te hahalala voambolana bebe kokoa, hanatsara na hanatsara ny fahaizanao amin'ny fiteny vahiny, tsy misy toa ny fampiharana amin'ny fampiharana fianarana fiteny toa an'i MosaLingua. Ary mba ahazoana aina kokoa amin'ny fifanakalozanao rehetra, mampiofana miaraka amin'ny mpiara-miasa amin'ny fiteny!
Noho izany dia hahita teny sy fitenenana etsy ambany ianao hahitanao ny fomba hanombohana resaka amin'ny teny anglisy, alemana, espaniola, italianina ary portogey breziliana. Mijanona ho anay fotsiny ny maniry ny fifanakalozana tsara!
Lazao hoe “frantsay aho” ^
Anglisy: Amerikanina / Anglisy aho
Alemanina: Ich bin Deutsche / r
Portiogey: Eu sou brasileiro (a)
Italiana: Sono italiano / a
Espaniola: soja español (a)
Lazao hoe “Tsy azoko” ^
Anglisy: tsy azoko
Alemanina: Ich verstehe nicht
Portiogey: Não heari
Italiana: Non capisco / Non ho capito
Espaniôla: No lo entiendo
Miteny hoe "Fantatrao ve aho?" ^
Anglisy: azonao ve aho?
Alemanina: Verstehen Sie mich?
Portiogey: Você está me hearendo?
Italiana: Mi capisce?
Espaniola: en Me entiendes?
Lazao hoe "Misy miteny frantsay ve?" ^
Anglisy: Misy miteny anglisy ve?
Alemanina: Spricht omaly jemand Deutsch?
Portiogey: Há alguém aqui que fale português?
Italiana: C'è qualcuno che parla italiano?
Espaniola: ¿Alguien habla inglés?
Lazao hoe “Ahoana no ilazanao… amin'ny [fiteny kendrena]?” ^
Anglisy: Ahoana no ilazanao… amin'ny [fiteny kendrena]
Alemanina: Olona malahelo ve ianao… auf [Zielsprache]?
Portiogey: Como se diz… em [idioma]
Italiana: Tongava eto… amin'ny [fiteny roa]?
Espaniola: Cómo se dice… en [lengua de destino]
Lazao hoe "Inona no antsoinao an'izany?" ^
Anglisy: Inona no iantsoana an'io?
Alemanina: Wie nennen Sie das?
Portiogey: Como é o seu nome?
Italiana: Come lo chiami questo?
Espaniola: ¿Cómo llamas a esto?
Lazao hoe “Inona no…?” ^
Anglisy: Inona no……?
Portiogey: O que signifikan…?
Italiana: Che signifikana…?
Espaniola: ¿Qué signifikan…?
Lazao hoe “Miadana kokoa, azafady” ^
Anglisy: Azonao atao ve ny miadana, azafady?
Alemanina: Langsamer, bitte.
Portiogey: Mais devagar, por manohana
Italiana: Più piano / lentamente, isaky ny favore
Espaniola: ued Puedes hablar más despacio, por favourite?
Lazao hoe “Tsy miteny (tsara) aho [fiteny kendrena]” ^
Anglisy: Tsy miteny [fiteny kendrena] aho (tena tsara)
Alemanina: Ich spreche kein / nicht so gut [Zielsprache]
Portogey: Eu não falo (bem) o [idioma]
Italiana: Non parlo (bene) [lingua di arrvo]
Espaniola: No hablo [lengua destino] (muy bien)
Lazao hoe “miteny (kely) aho [fiteny kendrena]” ^
Anglisy: miteny (kely) aho [fiteny kendrena]
Alemanina: Ich spreche (ein bisschen) [Zielsprache]
Portiogey: Eu falo um pouco de [idioma]
Italiana: Parlo (un po ') [fiteny roa]
Espaniola: Hablo (un poco) [lengua de destino]
Ny fitenenana hoe "diso ny fahazoanao ahy" ^
Anglisy: Heveriko fa diso ny fahazoanao ahy
Alemanina: Sie haben mich falsch verstanden
Portiogey: Você me naheno ratsy
Italiana: Lei mi ha capito lahy
Espaniôla: Creo que no me efa nandre
Lazao hoe "Azonao atao ve ny mamerina azy azafady?" ^
Anglisy: Azonao atao ve ny mamerina izany, azafady? / Lazao indray?
Alemanina: Kannst du das bitte wiederholen?
Portiogey: Você pode repetir, por favor?
Italiana: Puoi ripetere per favore?
Espaniola: lo Me lo puedes repetir, por favor?
Lazao hoe “Mianatra [fiteny kendrena]” aho ^
Anglisy: mianatra [fiteny kendrena] aho
Alemanina: Ich lerne [lZielsprache]
Portiogey: Estou aprendendo [idioma]
Italiana: Sto imparando [lingua di arrvo]
Espaniola: Estoy aprendiendo [lengua de estudio]
Fantatrao izao ny fomba hanombohana resaka amin'ny fiteny vahiny ^
Inty ! Fantatrao izao ny fomba hanombohana resaka amin'ny fiteny vahiny amin'ny fiteny 5 ilaina manerana an'izao tontolo izao. Ka na dia tsy mikasa ny hanana fahaizana miteny amin'ireto fiteny ireto aza ianao dia afaka mivoaka farafaharatsiny indraindray… toe-javatra sarotra!
Handeha lavitra ^
Tianao ve ity lahatsoratra ity?
Tsara ny famakiana ity lahatsoratra ity hatramin'ny farany. Ahoana ny hevitrao momba izany? Avelao izahay hanoratra, fa handrisika anay hanoratra lahatsoratra bebe kokoa
Misaotra tamin'ny vatonao
Ny fanindriana kely dia tsy mandany vola na kely aza, fa tena zava-dehibe ho anay izany:
Te hanomboka eo noho eo?
Manomboha mianatra fiteny maimaim-poana
Manampy anao hianatra fiteny iray na maromaro ve ity lahatsoratra ity?
Manana vaovao mahafinaritra 2 izahay… Ny voalohany: afaka manampy anao izahay. Vaovao mahafaly faharoa: afaka manomboka maimaim-poana ianao ary izao! Ampandehano ny andrana maimaim-poana ary araraoty ity fomba mahomby ity amin'ny fianarana fiteny mandritra ny 15 andro.
Flashcards hianarana voambolana, horonan-tsary amin'ny kinova am-boalohany miaraka amin'ny dikanteny, boky audio, lahatsoratra mifanaraka amin'ny haavonao: MosaLingua Premium (Web & Mobile) manome anao fidirana amin'izany rehetra izany, ary maro hafa! Manomboha dieny izao (maimaim-poana ary tsy misy atahorana).
Manomboka avy hatrany aho
Fivoarana manokana: miroborobo fisaorana amin'ny fiteny vahiny
feh Tranquillus | Aogositra 30, 2021 | Ao amin'ny tranonkala |
Efa nahatsapa ho toy ny vetaveta kokoa ianao, tsy mahalala fomba na mifanohitra amin'izany no mangoraka sy malala-tsaina kokoa rehefa miteny amin'ny fiteny hafa? Ara-dalàna izany! Eny tokoa, fandalinana maro no manamafy fa ny fahalalana fiteny vaovao dia afaka manova ny fitondrantenanao amin'ny hafa ... na ny tenanao! Hatraiza no mety hahatonga ny fianarana fiteny iray ho fananana amin'ny fampandrosoana manokana? Izay no hazavainay! Fikarohana maromaro no nanaporofo fa ny fahalalana fiteny iray dia mitarika fiovana eo amin'ny toetra.
Miombon-kevitra ny mpikaroka ankehitriny: ny fianarana fiteny iray dia mitarika fiovana eo amin'ny toetran'ny mpianatra. Ny fandalinana voalohany momba an'io lohahevitra io dia natao tamin'ny taona 60 avy amin'ny psycholinguistista Susan Ervin-Tripp, mpisava lalana amin'ny fandalinana ny psikolojia sy ny fivoaran'ny fiteny amin'ireo fiteny roa. Susan Ervin-Trip dia nanatontosa ny fandalinana andrana voalohany tamin'ireo olon-dehibe miteny roa. Te hitrandraka amin'ny antsipiriany kokoa ny fomban-kevitra izy fa miova ny atin'ny kabary amin'ny fiteny roa miankina amin'ny fiteny.
Tamin'ny 1968, i Susan Ervin-Trip dia nisafidy ny taranja fandalinana vehivavy teratany japoney monina any San Francisco ary nanambady amerikana. Tafasaraka amin'ny vondrom-piarahamonina japoney ary nonina tany amerikanina, ireo vehivavy ireo dia nanana fotoana vitsy kely nitenenana japoney. Ny fanontaniana napetrak'i Susan Ervin-Trip dia nanolo-kevitra ny hampifandray fihetseham-po amin'ity tranga manaraka ity: "rehefa tsy mitovy amin'ny an'ny fianakaviako ny faniriako dia mahatsapa aho…". Raha toa ny ankamaroan'ireo mpandahateny Japoney nanoritra fahatsapana “fahantrana lehibe” tamin'ny teny Japoney, dia hafa tanteraka ny fahatsapana voalaza amin'ny teny anglisy satria io dia "hery hiasa araka ny filan'ny olona iray" izay naroso avy eo - famantarana mafy.
Fifandrifiana tsotra fotsiny? Angamba tsia: hitantsika io fahasamihafana io amin'ny fandikana ny etnografika natao tamin'ny taona 1998 nataon'ny mpikaroka Michele Koven teo amin'ireo olon-dehibe Paris izay nifindra monina tany Portiogaly, izay nangatahany nitantara zavatra niainany manokana tamin'ny fiteny tsirairay avy (frantsay sy portogey) . Ny valiny dia naneho fiovana lehibe. Noho izany, ny vehivavy dia nirona kokoa hiaro ny heviny amin'ny tantara amin'ny teny frantsay, raha toa kosa ka nanao fanekena bebe kokoa rehefa miteny portogey.
Sary nataon'i Lucille Duchêne
Ary tsy izay ihany: novaina ihany koa ny toetrany arakaraka ny fitenin'ilay tantara nampiasaina. Nangataka an'ireo mpandray anjara i Michele Koven mba hamaritra ny tenany, amin'ny fiteny roa. Ny iray tamin'izy ireo, izay namaritra ny tenany ho "commuter tezitra" rehefa miteny frantsay izy, dia nisafidy ny hamaritra ny tenany ho "mpanjifa amin'ny banky sorisory sy mahalala fomba ary manam-paharetana izay tsy te hisarika ny sainy. Noho ny maha-izy azy mpifindra monina ”rehefa niteny Portiogey izy.
Inona no ambaran'ireo fandinihana roa ireo amintsika? Tsotra izany: mba hahafahana maneho ny hevitrao araka izay azo atao amin'ny fiteny vahiny dia zava-dehibe ny mianatra sy mampiasa voambolana marina sy miovaova. Izany antony izany no mahatonga ny fomba Babbel mifototra amin'ny fampiharana resadresaka izay mifanaraka tanteraka amin'ny tontolon'ny fianarana samihafa.
Inona no mahaliana anao? Tsy mora kokoa ny mahita fotoana kely natokana hianarana fiteny amin'ny fandaharam-potoananao, fa ny lohahevitry ny lesona koa mifanaraka amin'ny zavatra tianao. Noforonin'ireo manam-pahaizana momba ny fiteny sy ny fiteny maro samihafa, ny fampianarana Babbel dia natao hanampiana anao hanatsara ny voambolanao sy ny fahalalanao ilay fiteny mifanaraka amin'ny tanjonao manokana. Fomba tsara hanamafisana ny fivoaranao manokana sy hitomboany, sa tsy izany?
Na izany aza, na dia mampiseho valiny lehibe aza ireo fandalinana ireo, dia tokony hovakina am-pitandremana ihany anefa izy ireo. Eny tokoa, tsy nisy tamin'izy ireo nanisy fiheverana ny sahan-kevitra nianarana ireo fiteny notenenin'ireo mpilatsaka an-tsitrapo, ary koa ny fahasamihafana eo amin'ny tsirairay amin'ireo fiteny.
Atambaro ny fivoaran'ny tena manokana sy ny fianarany
Ny votoatin'ny fianarana fiteny iray dia tena ilaina mba hahatakarana ny fahitana azy, ary noho izany ny fahatsapana tsara na ratsy avy aminy. Eny tokoa, ny fianarana fiteny vaovao rehefa mandeha, mandritra ny fianarany na noho ny antony matihanina dia tsy hiteraka fahatsapana mitovy amin'ilay fiteny ao amin'ilay mianatra, izay tsy voatery hanana fahasamihafana mitovy ao an-trano. Miteny amin'io fiteny io. Raha apetraka, ohatra, ilay fiteny, dia azo inoana fa heverina amin'ny fomba ratsy izy io ary miteraka fanakanana.
Nanazava ny mpanao gazety amerikana Robert Lane Greene ny zava-misy fa ny olona miteny roa dia mampifandray ny fiteny vahiny amin'ny sehatra manokana ary indrindra amin'ny zavatra iainana mampihetsi-po manokana mandritra ny androm-piainany. Ireo toe-javatra manokana ireo dia misy fiantraikany amin'ny fahatsapana niainana.
Izany antony izany no mahatonga ny fomba Babbel mifototra amin'ny lesona 15 minitra mifantoka amin'ny fanazaran-tena miresaka izay mifanaraka tanteraka amin'ny tontolon'ny fianarana samihafa. Tsy vitan'ny hoe lasa mora be ny mampifangaro ny fianarana fiteny amin'ny fandaharam-potoananao, fa ireo lohahevitra noresahina tao amin'ireo lesona dia mifanaraka amin'ny zavatra mahaliana anao. Tombony ho an'ny fampandrosoana anao manokana!
Ny fiteny lazaintsika dia mitaona ny fahitantsika an'izao tontolo izao
Raha hitantsika teo fa mitana andraikitra lehibe ny tontolon'ny fianarana, ahoana ny amin'ireo olona izay efa nianatra ilay fiteny? Ny tranga polyglots dia tena mahaliana: tokoa, fanadihadiana marobe no mampiseho fa ny farany dia miroborobo kokoa na latsaka arakaraka ny fiteny ampiasaina. Fikarohana marobe no mampiseho fa ny firafitry ny fiteny iray dia afaka manova ary raha ny marina dia mitaona ny fomba fisainantsika, ny fisainana… ary noho izany ny firoboroboana.
Wilhelm von Humboldt, izay minisitry ny fanjakana prosiana ary mpanorina ny oniversite vaovao any Berlin, dia malaza amin'ny niasa tamina tetikasa antropolojika iray hampiavaka ny firenena. Ny fiteny dia singa voalohany teo amin'ny famaritana ny fiarahamonin'olombelona: araka ny filazany, ny fiteny dia mampita fahitana an'izao tontolo izao manokana ho an'ny fiarahamonina olombelona tsirairay avy. Mino izy fa ny fahitana an'izao tontolo izao dia taratry ny fiteninay sy ny kolontsainay. Ny fitenenana fiteny faharoa noho izany dia manova ny fomba fijerintsika ary mamela antsika hahita ny tontolo iainantsika amin'ny lafiny hafa.
Ny fandalinana hafa, toy ny momba ny fifandraisan'ny fiteny nataon'ny Edward manam-pahaizana momba ny fiteny Edward Sapir sy Benjamin Lee Whorf tamin'ny taona 50, dia naneho fifandraisana matanjaka teo amin'ny fiteny sy ny fahitana manokana an'izao tontolo izao. Raha ny filazan'izy ireo dia miaina mifanaraka amin'ny kolontsain'izy ireo manokana ny lehilahy ary maneho izany amin'ny alàlan'ny fiteny miteny.
Miroborobo amin'ny fahitana ny dikan-tenanao vaovao
Raha ny fahitana ny fianarana fiteny, ireo fandinihana samy hafa ireo dia mampiseho fa mifandray ny plurilingualism sy ny fivoaran'ny tena manokana. Antony maromaro no manazava ny fahatsapana fahatsapana ho "hafa" rehefa miteny vahiny ianao:
Fahasamihafana amin'ny fahaizana fiteny: miankina amin'ny haavon'ny fahaizan'ny fiteny, azo atao ny mahay maneho tsara kokoa ny lohahevitra amina lohahevitra samihafa ary indrindra afaka miresaka momba ny fihetseham-pon'ny tena na manao vazivazy sy vazivazy.
Fahasamihafana eo amin'ny kolontsaina: ny fiteny vahiny dia midika hoe fihaonana sy fifanakaikezana amin'ny kolotsaina vahiny. Raha ny olona miteny roa mitovy lenta amin'ny fiteny roa na maromaro dia miforona ny fahatsapana tsy mitovy amin'ny an'ny tenindrazana.
Ny tsy fitovian'ny fiteny: ny fitsipi-pitenenana sy ny syntax an'ny fiteny iray dia samy hafa amin'ny fiteny iray amin'ny iray hafa, izay manova ny fomba fitenenana.
Ireo antony samihafa ireo dia misy fiantraikany amin'ny toetrantsika satria manome ny mety hisaina amin'ny fiteny iray hafa amin'ny tenindrazantsika izy ireo, izay misy kolontsaina tsy manam-paharoa. Fomba maro samihafa amin'ny fahitana sy fandikana izao tontolo izao, ary vokatr'izany amin'ny fivoarana ao. Ka inona no andrasanao hianaranao fiteny vaovao miaraka amin'i Babbel?
Ahoana ny fampiasana sary ara-tsaina mba hitadidy tsianjery tsaratsara kokoa? - VIDEO
feh Tranquillus | Aogositra 25, 2021 | Ao amin'ny tranonkala |
Te hivoatra haingana amin'ny fiteny kendrenao ve ianao? Ny fampiasana sary ara-tsaina dia mety hanampy anao hahatratra ny tanjonao. Ahoana no fiasan'ity fomba ity? Lisa Joy, iray amin'ireo mpampianatra anglisy anay ao amin'ny MosaLingua ary mianatra teny tenany, dia manome anao fomba efatra hamoronana sary ara-tsaina mahomby izay afaka manampy anao hanatsara ny fitadidinao sy hianaranao fiteny.
Mampiasà sary ara-tsaina hanatsarana ny fiteny kendrenao ^
Saika 65% ny mponina dia mianatra amin'ny fahitana, izay midika fa misy vintana lehibe ho anao. Eny tokoa, ny atidohantsika dia mirona hiasa amin'ny fandefasana sary ho antsika.
Ity misy fitsapana haingana hahafantarana bebe kokoa! Eritrereto ny dia farany nataonao tany amin'ny fivarotana lehibe ary andramo ny mahatadidy antsipiriany betsaka araka izay azo atao. Mieritrereta zavatra manokana toa ny zavatra novidinao, raha naka harona na sarety fiantsenana ianao, raha teo irery ianao na niaraka tamin'olona iray, ny fomba nandoavanao vola tamin'ny farany… Aza misalasala manakimpy ny masonao raha mifanaraka aminao izany fanampiana izany.
Ahoana no ahatsiarovanao an'ity ao an-tsainao ity hetsika ity? Tamin'ny endrika teny, feo na sary ve? Ny ankamaroany dia hamaly amin'ny sary. Raha izany dia mety mianatra amin'ny sary ianao. Sa mety nahazo karazana fampahalalana hafa nampiato ny fitadidianao ianao?
Ankehitriny rehefa azonao ny tiako holazaina amin'ny hoe "miasa ny atidohantsika amin'ny fandefasana sary ho antsika," andao horaisintsika amin'ny ambaratonga manaraka izany ary alaintsika tahaka izay tadidin'ny manam-pahaizana momba ny fahatsiarovana.
Mamorona sary ara-tsaina mahomby amin'ny fianarana ^
Eo amin'ny sehatry ny fianarana fiteny dia misy tendro iray hanampy anao hianatra fomba fiteny vaovao haingana sy mahomby kokoa. Ny momba ny fampiasana sary ara-tsaina amin'ny fampifandraisana azy ireo amin'izy ireo. Ohatra, raha mila mahatadidy ny teny frantsay hoe "masoandro" ianao dia hanatsara ny fahafahanao mitadidy azy raha ampifandraisinao amin'ny solontenan'ny masoandro ny teny.
Mbola mandeha ve izany? Tsy amin'ny fotoana rehetra, satria mety mahazatra loatra izany. Soa ihany, tsy sarotra be ny famoronana sary an-tsaina. Hianaranao ny fomba hanaovana azy eto! Aza hadino ny mamorona sary izay manana iray na maromaro amin'ireo toetra efatra ireo:
fikambanana tsy mahazatra
fandraisana anjara amin'ny fihetseham-po
Andao hojerentsika ny tsirairay amin'izy ireo mba hahafantaranao tsara kokoa ary hanombohana hampihatra azy ireo amin'ny fianaranao fiteny avy hatrany.
Ny sary ara-tsaina tsara dia tsy maintsy ampitomboina, midika izany fa tsy maintsy misy refy sy refy tsy mifanaraka amin'ny fahita matetika. Ohatra, raha te hitadidy ny teny hoe "pied" amin'ny teny frantsay ianao dia afaka mieritreritra lehilahy manana tongotra lava kokoa noho ilay iray hafa. Na raha te hianatra ny teny unghia (rantsan-tànana amin'ny teny italianina) ianao dia alao sary an-tsaina ny vehivavy iray izay lava loatra ny hoho nikitika ny tany! Sarotra ny manadino ireo karazana sary ireo.
Fikambanana tsy mahazatra ^
Raha hitadidy ny teny hoe "boky", mieritrereta saka mamaky boky, mitazona azy eo anelanelan'ny faladiany… na mieritreritra vahiny manao solomaso hahatadidy ny teny hoe "vera" amin'ny teny italianina. Andramo ity teknika ity ary hevero ho toy ny lalao io. Mety hahafinaritra tokoa!
Ny hetsika ^
Fantatrao ve fa ny fifantohanao dia mandrisika bebe kokoa amin'ny fihetsehana noho ny amin'ny zavatra raikitra? Izany no antony anoratana an-tsary tsara kokoa ny sary mihetsika ao an-tsainao: manasarotra ny fanadinoana azy ireo izany. Raha tsy maintsy tadidinao ilay teny hoe coche (fiara amin'ny teny espaniola) dia tsara kokoa ny maka sary an-tsaina ny fiara mandeha. Na raha tsy maintsy tadidinao ny teny hoe "vato" amin'ny teny frantsay dia alao sary an-tsaina ny vato mihodina.
Fiantraikany ara-pihetseham-po ^
Ny fihetsem-po koa dia mitana andraikitra lehibe eo amin'ny fitadidianao. Araka ny efa azonao, sarotra be ny manadino ireo toerana izay misy ifandraisany amin'ny traikefa mahery na mifandraika amin'ny fotoam-pahasambarana na alahelo. Gaga isika matetika rehefa mahatadidy ny antsipiriany kely indrindra momba ireo fahatsiarovana ireo, rehefa afaka mandalo eo alohan'ny tranobe iray eny an-dalana hiasa nefa tsy mahatsikaritra ny lokony na ny isan'ny gorodony ...
Raha ampy taona ianao tamin'izay, dia tadidinao tsara hoe taiza ianao ary inona no nataonao rehefa nahalala ny zava-nitranga tamin'ny 11 septambra 2001, izay andro nampihetsi-po tokoa. Toy izany koa, isaky ny mianatra ny teny hoe "alika" amin'ny fiteny vaovao ianao dia azonao ampifandraisina amin'ny biby fiompinao izany.
Izay ihany ! Jereo fa mora toy inona ireo teknika ireo? Anjaranao no mamorona sary ara-tsaina mahomby aminao! Zarao aminay ny sasany amin'ireo hevitrao ao amin'ireo hevitra ary ampahafantaro anay hoe iza amin'ireo teknika efatra tianao hampiasaina ireo.
Naoty farany farany aza: arakaraka ny maha-izy azy ireo no mahamora kokoa ny fitadidiana. Ny fihetsika mampihetsi-po amin'ny sary ara-tsaina dia hanampy anao amin'ny dingan'ny tsianjery. Ny sary ara-tsaina dia mandaitra kokoa raha mamorona azy ianao. Ka manaova famoronana ary manaova fialamboly!
Ireo torohevitra rehetra amin'ny horonan-tsary ^
Azonao atao ny mahita ny toro-hevitra rehetra an'i Lisa-Joy amin'ny horonan-tsary. Amin'ny teny anglisy, fa misy dikanteny amin'ny teny frantsay (sy fiteny hafa) raha ilaina. Tsindrio ny kodiarana mba hampavitrika azy ireo ary azonao atao koa ny mampiadana ny hafainganan'ny diksion raha ilaina.
Misoratra anarana amin'ny fantsona YouTube anay!
Raha mahaliana anao ity lahatsoratra ity dia aza misalasala mijery an'izany koa:
Amin'ny firy taona ianao no tokony mianatra fiteny vahiny? Mijoro ho vavolombelona ny zokiolona!
feh Tranquillus | Aogositra 18, 2021 | Ao amin'ny tranonkala |
Tsy sakana velively amin'ny fianarana fiteny vahiny ny taona. Ireo mpisotro ronono dia manana fotoana manokana hanaovana hetsika vaovao mandrisika azy ireo. Betsaka ny antony manosika ary ny tombony dia hita amin'ny fotoana fohy ary koa amin'ny fotoana maharitra. Tonga amin'ny taona ve ny fahendrena? Ny zandriny indrindra dia fantatra amin'ny anarana hoe "spaonjy lela" fa rehefa mihalehibe ianao dia afaka mamakafaka kokoa ny olanao sy ny fahalemenao ary maharesy azy ireo haingana mba hahitana vokatra mifanaraka amin'ny antenainao. Andrasana.
Amin'ny firy taona ianao no tokony mianatra fiteny vahiny? ^
Voalaza matetika fa manana fotoana mora kokoa amin'ny fianarana fiteny iray ny ankizy. Midika ve izany fa ny be taona dia hanana fahasahiranana lehibe amin'ny fianarana fiteny vahiny? Valiny: tsia, ho hafa fotsiny ny fahazoana azy. Tsy maintsy manao ezaka samihafa ireo zokiolona. Ny fandinihana sasany dia manazava fa ny vanim-potoana mety indrindra hianarana teny vahiny dia na rehefa mbola zaza kely, eo anelanelan'ny 3 sy 6 taona, satria ny ati-doha dia malina kokoa sy malefaka kokoa. Ny mpikaroka ao amin'ny MIT (Massachusetts Institute of Technology) dia nanatsoaka hevitra fa sarotra kokoa ny mianatra fiteny aorian'ny taona 18 noho ny antony ara-kolontsaina, biolojika ary ara-batana. Na izany aza, ny fianarana fiteny vahiny amin'ny taona manaraka dia azo atao tsara, fa ny fametrahana ny antony manosika sy ny fahamaotinana.
Inona no manosika ny olon-dehibe hianatra fiteny vahiny? ^
Ireo fiteny ianaran'ny be taona indrindra ^
Araka ny fanadihadiana Ifop, 85% amin'ireo zokiolona no milaza fa afaka mianatra fiteny vahiny. Amin'ny vanim-potoana dizitaly, mandray andraikitra ny zokiolona amin'ny fitrandrahana ireo fomba fianarana amin'ny Internet vaovao ireo. 91% amin'izy ireo aza mino fa izany no iray amin'ireo fomba tsara indrindra hijanonana mailaka amin'ny saina. Eny tokoa, hatramin'ny nisotroan-dronono ireo, be antitra manohy mianatra zava-baovao! Manao hetsika tsy tapaka izy ireo, ao anatin'izany ny mianatra fiteny vaovao indraindray.
Anisan'ireo fiteny fantatry ny be taona indrindra ny anglisy (45%), espaniola (27%), italianina (19%) ary alemà (11%).
Arakaraka ny maha-antitra anao no mety hahalasa saina ny mianatra fiteny iray. Na izany aza, ny fandalinana Ifop dia mampiseho amintsika fa ny zokiolona dia be fikirizana sy mahery fo amin'ny fanitsiana mihoatra ny 18-35 taona.
Fotoana hanombohana ^
Nanontanianay i Henri, 75 taona, nisotro ronono tao Saint Jean de Luz, inona no nanosika azy hianatra teny espaniola. Nohazavainy taminay fa nanana trano fonenana any Lira, Espana izy, izay ipetrahany amin'ny fararano sy ririnina, satria malefaka kokoa ny mari-pana noho ny any Frantsa. Tiany ny afaka miresaka amin'ny tompon-tany ary mampahafantatra ny tenany rehefa mandeha any amin'ny dokotera izy na any amin'ny klioba golf. Koa satria manam-potoana sy antony manosika hianatra izy dia mandroso haingana. Izy dia efa nahavita nisoratra anarana tamin'ny klioban'ny golf sy tamin'ireo mpilalao tetezana, tamin'ny telefaona espaniola rehetra! Tena nirehareha izy fa afaka nitantara taminay ny zava-niainany niaraka tamin'i Mosalingua.
Lalam-piainana vaovao ^
Betsaka ny antony mahatonga an'io hafanam-po amin'ny fiteny io. Ny fisotroan-dronono dia manafaka ireo teritery arak'asa, ary maro no mahita ny fotoana mety indrindra hanatanterahana ireo tetik'asa efa nijanona hatry ny ela, hampanan-karena ny fahalalany, hampivelatra ara-tsaina, fa tsy izany ihany. Ny fisafidianana ny hisotro ronono amin'ny alàlan'ny fianarana fiteny iray dia mampiseho faniriana hifantoka indray amin'ny làlam-piainana vaovao sy ny fifandraisana amin'izao tontolo izao.
Hatsarao ny fifandraisana amin'ireo manodidina anao ^
Ny antony iray dia mety ny faniriana hanatsara ny fahaizany mifampiresaka, mifanakalo ary mizara. Ny olona sasany te-ho zatra amin'ilay fiteny ampiasaina ao amin'ny tontolon'ny fianakaviana. Raha ny hafa kosa te-hampazoto ny tenany amin'ny fitenin'ilay firenena voakasik'izany mba hahafahan'izy ireo mandeha any hijery ny zanany sy ny zafikeliny. Noho izany, ny fikatsahana fahaiza-manao amin'ny fiteny dia matetika mifandray amin'ny fampiharana ny fizahan-tany. 63% ny zokiolona namaly ny fanadihadiana Ifop dia nanondro fa mianatra fiteny iray hifandraisana tsara kokoa izy ireo mandritra ny dia lavitra fa tsy ho an'ny fivoarany manokana (40%). Vonona ny handeha amin'ny faravodilanitra vaovao noho izany izy ireo hanao traikefa nahafantarana ny fanabeazana. Eny tokoa, mankasitraka tokoa ny fifanakalozana tampoka, tsy misy sakana amin'ny fiteny, amin'ireo mponina eo an-toerana. Vokatr'izany dia tsikaritray fa mihamaro ny olona antitra manomboka manao fitsidihana eran'izao tontolo izao ary misy kosa ireo manapa-kevitra handany ny fisotroan-dronono any ivelany.
Mifandraisa amin'ny fakanao ^
Fanentanana iray hafa ho an'ny zokiolona hianatra fiteny vaovao ny faniriana hifampiresaka amin'ny tenin-drenin'ireo ray aman-dreniny mba hifandraisany amin'ny fakan'ny fianakaviany. Toa an'i Simone, 81 taona, izay niaviany tamin'ny alàlan'ny raibeny sy renibeny, dia maniry ny hifandray amin'ny kolontsain'ny razany. Tadidiny ny resaka tamin'ny teny alemanina fony izy mbola kely, hira nianarany tamin'ny fahazazany, ary very ilay fampiharana. Nanapa-kevitra ny hanao kilasy amin'ny Oniversite izy, izay nahafahany nahafantatra rima vitsivitsy momba ny akanin-jaza. Ny fifehezana ny fiteny niaviany dia midika hoe miverina amin'ny tantarany sy ny niandohany, angamba mihaona amin'ny fianakaviana vaovao?
Fomba iray hitazomana ny fahatsiarovanao amin'ny taona ^
Mety ho dingana sarotra ny fisotroan-dronono, ka izany no mahatonga ny fandentehana tena amin'ny fianarana fiteny iray ho fomba tsara hitazomana hatrany. Amin'ity tranga ity, maninona raha mandray fanamby vaovao hanomezanao herim-po sy handrisika ny fanahy? Ny iray amin'ireo antony lehibe hisoratana anarana amin'ny fampiofanana dia ny ahafahanao mandrisika sy miasa amin'ny fitadidianao isan'andro mba hahafahanao miady amin'ny fahanteran'ny ati-doha. Eny tokoa, ny fitadidiana dia ampiasaina be indrindra rehefa mianatra fitsipi-pitenenana, voambolana ... Ho fanampin'izany, fanadihadiana maro no mampiseho fa ny fahazoana fiteny vaovao dia afaka manatsara ny fahaizan'ny be antitra ary misoroka, na manemotra mihitsy aza ny fiandohan'ny aretina Alzheimer.
Ahoana ary amin'ny firy taona no mianatra fiteny vahiny? ^
Mitadiava fanampiana mety ^
Betsaka ny azo atao amin'ny fianarana fiteny vahiny. Lesona ho an'ny tsirairay na ho an'ny vondrona, fiofanana, fijanonana ho an'ireo zokiolona anaty fanitrihana, oniversite maimaimpoana na oniversite rehetra (UTA), fikambanan-teny eo an-toerana, fampianarana an-tserasera ... Na amin'ny telefaona, solosaina na tablety, amin'ny alàlan'ny fampiharana, na inona na inona azo atao. Ny zava-dehibe dia ny mahita ny haino aman-jery fianarana mifanaraka amin'ny filanao sy ny filanao.
Makà fotoana hamoronana tontolo iray izay manampy amin'ny fianarana. Misaotra ny Internet, misy atiny be dia be tokony hatsaraina. Hahita gazety, mozika, podcast, horonantsary, quiz… izay rehetra ilainao atao mba hampiala-voly azy araka izay tratra. Raha manana 20 min ao amin'ny metro ianao, 10 minitra ao amin'ny efitrano fiandrasana, aza misalasala manangana ny rindranasa ianaranao amin'ny fiteny. Mila fifehezana sy antony manosika ny fianarana fiteny vaovao.
Sahia miteny! ^
Sahia miteny, aza matahotra manao fahadisoana, satria arakaraka ny ampiharanao no mampandroso anao. Amin'izany no ahafahana manamafy ny fifamatorana ara-tsosialy amin'ny hafa, satria ny fananana namana "tandem" dia fomba fanaovana fihaonana ara-batana sy virtoaly. Hiroborobo ny fahatokisanao tena ary tsy ho olana intsony ny sakana amin'ny fiteny.
Mampiasà fampiharana finday ^
Mosalingua dia manolotra fomba fianarana haingana amin'ny telefaona, takelaka ary solosaina. Na inona na inona taonanao, ny toeram-ponenanao na ny antony manosika anao, dia hanana mpanazatra fiteny vahiny virtoaly eo akaiky eo foana ianao hampiroborobo anao. Ny fomba dia tsy mitaky mihoatra ny 20 minitra isan'andro, ary ao anatin'ny telo volana, ny olona iray dia afaka mahatratra ny ambaratonga ampy handehanana any amin'ny firenena na hamaky magazine.
Aza misalasala intsony fa mbola tara loatra vao manomboka! Fa aza adino ny miala voly ambonin'ny zavatra hafa rehetra.
Amin'ny firy taona vao mianatra fiteny vahiny: mandroso lavitra ^
Raha mahaliana anao ity lohahevitra ity, ity misy lahatsoratra iray hafa mety tianao:
Bonjour Senior dia sehatra fampahalalana sy fampitahana amin'ireo zokiolona sy ny mpikarakara azy ireo. Manolotra torolàlana azo antoka, vaovao ary vahaolana fanohanana ao an-trano izahay na amin'ny ivon-toerana mety.
Ny torolalana fampidirana anay amin'ny fiteny Japoney
feh Tranquillus | Jul 15, 2021 | Ao amin'ny tranonkala |
Amin'ny fiteny japoney dia antsoina hoe 日本 (Nihon) izy io. Ny teny Japoney dia tamin'ny teny frantsay. Na izany aza, aleonay ilay anarana hoe Japon. Adika amin'ny teny frantsay hoe "Pays du soloil levant", izy io na mihoatra ny kely ny dikany ara-bakiteny amin'ny fitenin'ny firenena. Kapila mena miloko fotsy. Mihoatra ny teny sy ny fiteny ny sary an'ohatra ary aseho amin'ny saina ihany koa. Japon - na ny 日本, noho izany - dia firenena satro-boninahitra mistery. Anisan'ireo piozila tsara indrindra eto amin'ny nosy: ny fiteny japoney.
Avy aiza àry ny teny Japon amin'ny teny frantsay (sy ny mitovy aminy amin'ny ankamaroan'ny fiteny hafa eto an-tany)? Rehefa tonga amoron-dranomasina any amin'ny Farany Atsinanana ny tantsambo Portiogey, ny Mandarins no mamindra azy ireo amin'ny nosy Japoney. Notsongaina hoe "Jipangu", lasa Japon ny anaran'ilay faritany!
Miaraka amin'ny mpianatra 21.000 any Frantsa amin'ny taona 2018, ny fiteny Japoney dia mijanona lavitra ao ambadiky ny mpianatra an-tapitrisany amin'ny anglisy na espaniola. Saingy isan-taona dia mitohy manaparitaka ny ranon'ny Japon sy ny Tendrombohitra Fuji ny fiteny Mishima. Babbel dia manolotra fahitana ara-piteny sy ara-kolontsaina an'i Japon!
Ny tantaran'ny teny Japoney nanomboka tamin'ny vanim-potoana Yamato ka hatramin'ny vanim-potoana "Cool Japan"
Manodidina ny 250 dia nisy tarana-mpanjaka voalohany naorina tao amin'ny faritanin'i Yamato - ny prefektioran'i Nara ankehitriny. Izay ifandimbiasan'ny panorama ankehitriny amin'ireo tranobe maoderina sy ireo tempoly taloha, dia manomboka ny fivoaran'ny fiteny japoney lava. Vitsy ny firaketana an-tsoratra nosoratana talohan'ny nanombohan'ity vanim-potoana ity. Nandritra ny taonjato maro, ny fiteny japoney araka ny fisiany dia fomba am-bava. Ireo moanina bodista avy any Chine no mitondra ny rafitr'izy ireo any amin'ny nosy. Tamin'ny taonjato faha-XNUMX, tamin'ny andron'i Nara, nanomboka nampiasa ideograms sinoa ny Japoney. Ny script hafa dia novolavolaina mba hamoronana an'ity rafitra fitambarana mahazatra an'i Japon izay tohizan'ny vondronosy ankehitriny.
Tamin'ny vanim-potoana Edo, teo anelanelan'ny taonjato faha-1903 sy faha-XNUMX, vao tena namboarina ny fiteny japoney. Ny vanim-potoana vaovao dia mitondra ny anjarany amin'ny fanovana ara-kolontsaina sy fiteny. Tamin'ny fiandohan'ny taonjato faha-XNUMX, ny vanim-potoana Meiji, mitovy dika amin'ny fandrosoana sy ny fanavaozana ny firenena, dia manara-penitra ny fiteny miorina amin'ny fitenin'i Tokyo. Tamin'ny taona XNUMX, namoaka boky torolàlana ofisialin'ny fiteny japoney natao ho an'ny sekoly ny governemanta Japoney.
Fomba fiasa iray izay mampatsiahy ny fanaingoana ny italianina amin'ny tenim-paritra Florentine na ny fandraisana ny teny Paris taorinan'ny Tolom-piavotana frantsay!
"Japan Cool": rehefa miditra amin'ny vanim-potoana kawaii i Tokyo
Tsy misaraka amin'izany ny kolontsaina japoney noho ny kolontsainy. J-Pop, manga, anime, lalao video, sushi ary sake: antsoina hoe "Japan Cool", misy ny endriny malefaka japoney. Manomboka amin'i Pikachu ka hatramin'ny Hello Kitty, ao anatin'izany ireo boaty bento sy kimono, kawaii (か わ い い), "mahafatifaty" amin'ny teny frantsay, dia foto-kevitra efa nahomby izay nahavita nanondrana nanerantany. Anisan'izany i Frantsa.
Na eo aza ny fironana mitokana mitokana eo amin'ny tantaran'i Japon, ny vondronosy dia efa ela no nametraka fifandraisana akaiky tamin'i Frantsa. Mariky ny fanatsarana, ny fiteny sy ny kolontsaina frantsay dia nahaliana ny taranaka japoney… hatramin'ny nahatonga ny fikorontanana ara-tsaina marina! 200.000 XNUMX izy ireo izao hianatra ny fiteny Molière. Eo anelanelan'ny mpanao hosodoko Foujita, ny chef Takeuchi ary ny mpanorina ny marika Kenzo, dia Japoney maro no nandray anjara tamin'ny fitaoman'ny kolontsain'izy ireo, tao anatin'ny fisoratana anarana tena samihafa, tamin'ny fanorenany tao Paris.
Aiza no miteny Japoney ankehitriny?
Manana fitenenana 130 tapitrisa izao ny fiteny japoney. Raha ny tena izy dia tenenina any Japon, ny japoney dia miorina ara-tantara any California sy Hawaii, na dia manjary manjavona any aza ny fampiasana ilay fiteny. Maherin'ny 3.000 kilometatra atsimon'i Honshū, nosy kely iray izay nozanahin'i Japon dia mbola manaiky ny Japoney ihany. Ity i Angaur, iray amin'ireo fanjakana 16 mpiorina ao Palau. Raha ny marina, eto amin'ity nosy Pasifika ity izay zara raha misy mponina mihoatra ny 100 ary ny faritra azo ampitahaina amin'ny arrondissement faha-15 an'i Paris, dia saika lany tamingana ny Japoney.
Hiragana, katakana ary kanjis: ireo script 3 an'ny fiteny Japoney
Ny fanoratana ny teny japoney dia mifototra amin'ny tarehin-tsoratra maromaro:
🗾 Ilay hiragana
🗾 Ny katakana
Ny fianarana Hiragana sy Katakana (famantarana 100 daholo) dia tsy hitondra anao ela kokoa noho ny abidia sirilika. Mitovy amin'ny rafitry ny litera latina ny hiragana dia famantarana fonetika izay ampiasaina amin'ny fanoratana teny japoney. Amin'io fitsipika io ihany, ny katakana dia natokana ho an'ny teny avy any ivelany (afa-tsy ny sinoa). Raha ny kanjis dia nolovaina tamin'ny fiteny sinoa izy ireo. Ny famantarana tsirairay dia samy manana ny feony sy ny heviny avy. Raha manisa 50.000 ny Japoney dia "2.000 XNUMX" fotsiny amin'izy ireo no ampy isan'andro. Misy lisitra ofisialy amin'ireto "kanjis fampiasana mahazatra" antsoina hoe jōyō kanji. Noho izany, ireo rafitra sary telo ireo dia miara-monina ary ampiasaina miaraka. Tsy fahita matetika ny mahita ireo andinin-tsoratra masina telo ao anaty fehezanteny iray ihany.
Misy fiteny iray ve ny fiteny japoney sy sinoa? Tsia! Ny lovan'ireo kanjis dia manan-tantara ihany. Tsy tafiditra ny genetika momba ny fiteny. Mandarin dia fiteny sinoa-Tibetana, mifandraika amin'ny fiteny sinoa. Mitokana ny Japoney. Raha lazaina amin'ny teny hafa dia fianakaviana mitoka-monina ity fiteny ity. Ny teôria amin'ny fiteny Altaika, izay mikendry ny hampivondrona ny Japoney, Tiorka, Mongoliana na koa Koreana aza, dia mbola miteraka ady hevitra!
Ny fiteny japoney: fiteny sarotra… sa tsy dia fantatra loatra?
Sinoa, Rosiana, Arabo ... Ireo tandrefana dia mazàna mahafeno fepetra ho fiteny sarotra izay exotic loatra ary lavitra ny fomba fisainany. Ary ny fiteny Mishima dia tsy misy ankanavaka. Ka sarotra ve ny mianatra ny fiteny japoney… sa tsy dia fantatra loatra?
Ankoatry ny sakana amin'ny fanoratana sy voambolana izay tsy dia misy itovizany amin'ny fiteny Indo-Europe dia mampiasa rafitra SOV (Subject-Object-Verb) ny teny Japoney. Japoney iray noho izany no hiteny hoe "mihinana ny mofo aho" fa tsy "mihinana ny mofo" (rafitry ny SVO, lohahevitra-Verb-Object). Raha toa mifanohitra amin'ny intuitive ny olona frantsay io fampiasana io dia maro ny fiteny SOV noho ny fiteny SVO eto an-tany! Ny Tiorka, Persia, Basque ary Latina dia ohatra hafa amin'ny fiteny SOV. Amin'ny teny japoney dia matetika no esorina ilay lohahevitra rehefa hazavain'ny zava-misy ao aminy fa tsy mahazatra ny miafara amin'ny firafitra tsorina amin'ny karazana OV.
SOV, SVO, VSO,…? Ho fanampin'ny fiteny SOV sy ny SVO izay mandrafitra ny telo ampahefatry ny fitenenana manerantany, dia misy ny fitambarana hafa rehetra:
Ny fiteny VSO, amin'ny karazana Verb-Subject-Object ("mihinana mofo aho"), toy ny Arabo na Irlandey Gaelic; fiteny VOS, avy amin'ny karazana Verb-Object-Subject ("mihinana ny mofo I"), toy ny Malagasy; Ny fiteny OVS, amin'ny karazana Object-Verb-Subject ("ny mofo mihinana I"), toy ny fiteny Amerindianina sasany; ny fiteny OSV, ny karazana Object-Subject-Verb ("ny mofo nohaniko"), tsy dia fahita firy… afa-tsy amin'ny fomba firesaka mampiavaka an'i Yoda amin'ny Star Wars!
Na eo aza izany, ireo Japoney mianatra dia afaka mifaly amin'ny vaovao tsara amin'ny fitsipi-pitenenana:
🗾 Japoney dia tsy manana plural
🗾 Japoney dia tsy manana lahatsoratra voafaritra sy tsy voafaritra
Anisan'ireo miavaka manokana amin'ny Japoney, ny fiteny dia tsy manana teny voatokana hanondroana ireo volana, toy ny Janoary, Febroary, Martsa, sns. Mifanohitra amin'izany, ampifandraisin'ny Japoney ny kanji 月 (volana ary volana tsy ankolaka) sy ny isan'ny volana!
Teny tsotra na sarotra, dia tsy tokony hataontsika tsinontsinona ny maha-zava-dehibe ny antony manosika amin'ny fianarana. Ny fiteny tsirairay dia manana ny mampiavaka azy manokana izay mahatonga azy io ho mora na sarotra amin'ny mpandahateny iray.
Fanononana? Portogey: mianatra miteny portogey toy ny teratany
feh Tranquillus | Jul 14, 2021 | Ao amin'ny tranonkala |
Mba hianarana Portiogey, zava-dehibe ny ifantohana amin'ny fanononana azy. Ho hitanao fa tsy sarotra ho an'ireo miteny frantsay ny fanononana Portiogey, satria ny ankamaroan'ny litera dia mitovy amin'ny fomba fiteniny amin'ny teny frantsay! Ho fanampin'izany, maro ireo fotom-peo (feon'ny litera na fitambaran'ny litera) mitovy ihany koa. Mazava ho azy, ny fanononana ny Portiogey dia tsy mitovy amin'ny alehanao, fa ity torolàlana amin'ny fanononana Portiogey ity dia hahafahanao maneho hevitra sy hahatakatra na aiza na aiza. Tongava ary hahita Portiogey Breziliana!
Fanononana? Portiogaly: ny tokony ho fantatrao raha te hiteny tsara ^
Miaraka amin'ny mpiteny teratany maherin'ny 230 tapitrisa miteny an'io fiteny io saika manerana ny kaontinanta rehetra (Azia, Eropa, Afrika, ary toerana misy ny ankamaroany, Amerika), Portiogey no iray amin'ireo fiteny be mpampiasa indrindra eto an-tany. Ara-dalàna noho izany ny maniry hianatra azy. Hifantoka amin'izany isika amin'ny fanononana Portiogey an'i Brezila, ilay firenena misy mpiteny Portiogey indrindra. Aza manahy anefa, ny mpandahateny Portiogey avy any amin'ny firenen-kafa dia hahatakatra anao tsara koa, raha te-ho any Portugal ianao na Angola ohatra.
Raha te hahafantatra ny fomba fanononana Portiogey, dia tsy maintsy mianatra ny abidia aloha ianao. Eto, tsy misy fahasarotana raha vao jerena, mitovy amin'ny antsika io. Litera 20 no tononina na manana "fihetsika" mitovy amin'ny amin'ny teny frantsay: A, B, C, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, S, V, W , X, Y ary Z. Ny litera K, W, X ary Y dia nampiana tato amin'ny abidia portiogey tato ho ato satria litera matetika ampiasaina amin'ny teny vahiny sasany.
Mba hanamorana izany ho anao dia mbola ho hitanay daholo izy rehetra. Raha te-hamaky sy / na hanonona ny teny amin'ny fiteny Portiogey tokoa ianao dia tsy maintsy mifantoka amin'ny fanononana azy ireo aloha.
Mitandrema ihany anefa! Ny zavatra ho hitanao eto dia ny lalàna amin'ny ankapobeny. Mety misy ny maningana na ny fanononana tsy mitovy amin'ny toerana alehanao na olona iresahanao (na dia ao anatin'ny firenena iray aza!).
Vowels amin'ny fanononana Portiogey ^
Ny litera A, I ary O dia tononina toy ny amin'ny teny frantsay. Ho hitanao eto ny fanononana ny zanatsoratra rehetra eto ambany:
A dia tononina toy ny "a" amin'ny akondro
E dia tononina hoe "é" toy ny amin'ny meta (tahotra)
Tononina toy ny “i” aho any ilha (nosy)
O dia tononina ho "o" misokatra, toy ny amin'ny avó (renibe), na amin'ny "o" mihidy, toy ny amin'ny porto (seranana)
U dia tononina tahaka ny "na" amin'ny rua (arabe)
Y dia tononina tahaka ny "y" frantsay amin'ny yoga (yoga)
Mitandrema ihany anefa, arahin'ny M na ny N, ireo zanatsoratra dia mirona hisokatra kokoa (ny E dia tononina hoe "è" ohatra) ary ihomehezana. Tsy misy fahasahiranana lehibe ho an'ireo miteny frantsay eto, satria izahay koa dia manana feo voadio amin'ny fiteninay.
Consonants izay manova ny feony ^
Araka ny voalaza tetsy aloha, ny renisoratra B, F, J, K, L, M, N, P, Q, V, W, X ary Z dia tononina toy ny amin'ny teny frantsay. Mangina ihany koa ny litera H, toy ny amin'ny teny frantsay ihany.
Na izany aza, ny litera sasany amin'ny abidia dia afaka manova ny feony. Tsy dia misy firy, fa ny fahalalana tsara azy ireo dia tena ilaina mba hahafehy ny fanononana ny Portiogey Breziliana. Hitanay izao ny litera rehetra izay tsy mampiseho fahasahiranana amin'ny fanononana ny Portiogey, ireto misy izay mila ezaka bebe kokoa:
Ny litera C ^
Ny litera C dia manaraka ny fihetsika mitovy amin'ny amin'ny teny frantsay:
Arahin'ireo zanatsoratra A, O ary U, ny litera C dia tononina / k / toy ny amin'ny kafe (kafe) na casa (trano)
Arahan'ny zanatsoratra E sy I, ny litera C dia tononina / s / toy ny amin'ny centro (afovoany)
Misy koa ny litera Ç izay tononina toy ny amin'ny teny frantsay, na inona na inona toe-javatra. Ohatra: França (France)
Ny litera D ^
Ity litera ity dia tononina hoe "dj" rehefa manaraka ny litera I na ny litera E izy rehefa faran'ny teny iray, toy ny amin'ny onde (aiza) na dia (andro)
Ny litera G ^
Tahaka ny litera C, ity taratasy ity dia mitovy amin'ny tamin'ny teny frantsay:
Arahin'ireo zanatsoratra A, O ary U, ny litera G dia tononina / g / toy ny amin'ny garrafa (tavoahangy)
Arahin'ireo zanatsoratra E sy I, ny litera C dia tononina / Ʒ / toy ny amin'ny girafa (zirafy)
Ny litera R ^
Ny Portiogey R (avy any Brezila) dia tononina amin'ny fomba telo samy hafa:
Amin'ny fiantombohan'ny teny iray, dia tononina toy ny H lany andro izy, toy ny amin'ny anglisy na alemà.
Eo afovoan'ny teny dia mihorona matetika izy, toy ny verde (maintso)
Rehefa antsoina hoe ("RR") izy, dia tononina hoe R R - carro (fiara), na H - cachorro (alika) efa lany daty
Ireo feo ireo - afa-tsy ny French R - dia tsy dia voajanahary loatra amin'ny mpandahateny frantsay, saingy mora ny mifehy amin'ny fanao kely. Aza misalasala manao fampiharana!
Ny litera S ^
Toy ny amin'ny teny frantsay, ny litera S dia mety manana feo samihafa arakaraka ny toerany amin'ny teny iray:
amin'ny fiandohan'ny teny na rehefa avo roa heny dia tononina / s /, toy ny amin'ny sol (masoandro);
eo anelanelan'ny zanatsoratra roa dia tononina / z /, toy ny amin'ny casa (trano).
Ny litera T ^
Matetika io taratasy io dia tononina toy ny French T. Saingy, amin'ny teny Portiogey Breziliana, ny litera T arahin'ny litera I na ny litera E amin'ny faran'ny teny dia tononina hoe "tch", toy ny amin'ny gente (gens).
Taratasy accents ^
Amin'ny teny Portiogey, ny zanatsoratra dia azo tsindriana. Ny lantom-peony (grave, maranitra, circumflex, tilde) dia mety hanana fiasa samihafa arakaraka ny teny misy ao aminy. Ampiasaina, ankoatry ny zavatra hafa, izy ireo:
manavaka teny roa mitovy tsipelina: pode (hainy) vs pôde (azony atao)
manondro hoe aiza ny lantom-peo rehefa tsy manaraka ny fitsipika ankapobeny: máquina (masinina), útil (mahasoa)
manondro ny fanononana ny vondrona zanapeo iray: cão (alika), mãe (reny)
famantarana ny fihenan'ny zanapeo roa eo anelanelan'ny teny roa mifanesy: a + aquela ⇒ àquela (ho an'io), a + a ⇒ ho (ka ...)
manisy fanovana kely amin'ny fanononana: pêlo (volo), pôr (mametraka, mametraka)
Zava-dehibe noho izany ny fanaovana tsianjery tsara ny fanononana Portiogey, ary koa ny tsipelina teny hianarana tsara.
Ny fiakarana goavambe sy henjana amin'ny fanononana Portiogey ^
Ny fiteny portiogey dia fiteny tonika, tsy toy ny frantsay, izay fiteny "fisaka" kokoa. Ny accents dia ampiasaina hanondroana ny toerana apetraka ny lantona tonika, fa koa hanovana ny feo. Ny feo miaraka amina lantom-peony na accent accentes dia miteny malalaka kokoa. Ohatra, ny litera litatra O izay tononina toy ny O amin'ny "paoma" (vava misokatra): avó (renibe).
Ny accent grave dia matetika natokana ho an'ny contraction ny preposition a miaraka amin'ny teny izay manomboka amin'ny a-. Ohatra, fa tsy manoratra aa na aas, dia manoratra à na às (à la).
Ny lantom-peo accent amin'ny fanonona Portiogey ^
Ny accent circumflex amin'ny teny portogey dia manana fiasa mitovy amin'ny amin'ny teny frantsay: manova ny feon'ny zanapeo izay mitondra azy. Averina am-bava kely kokoa noho izany ny feo noho izany.
Ny tilde amin'ny fanononana Portiogey ^
Ny tilde dia ampiasaina amin'ny zanatsoratra sasany hanovana ny feony. Ny zanatsoratra mitondra azy avy eo lasa lasa nasalize.
Fitambaran-taratasy amin'ny fiteny portogey ^
Ny fitoviana hafa amin'ny frantsay, dia misy fitambarana litera roa na telo izay miova ny fanononana azy amin'ny teny Portiogey. Toy izao no ilazana ireo vondrona taratasy ireo amin'ny teny Portiogey:
Vondrona consonant ^
CH> Toy ny amin'ny teny frantsay, ny fitambaran'ny litera C sy H dia manome ny feo / ʃ / an'ny "chat", na chamar (hiantsoana) amin'ny teny Portiogey
LH> Ity vondrona taratasy ity dia tononina / ʎ / na toy ny "ill-" amin'ny teny frantsay na espaniola: filho (son)
NH> Ity vondrona taratasy ity dia tononina / ɲ / na “gn”: amanhã (rahampitso)
ÇC> Ity taratasy mitambatra ity dia tononina / ks /
Ireo fitambaran-tsoratra ireo dia miteraka feo orona, toy ny feo frantsay --on, -an, -in. Ny fanononana ny portogey an'ireo feo ireo dia tena mitovy ihany koa!
ÃE> ity tarika litera ity dia manomboka amin'ny feo / a /, avy eo mivezivezy haingana mankany amin'ilay feo hoe "in": mãe (reny)
ÃO> ity fifangaroana litera ity dia manomboka koa amin'ny feo / a / ary mihetsika haingana be mankany amin'ilay feo "on": pão (fanaintainana)
ÕE> sarotra kokoa tononina, ity iray ity dia manomboka amin'ny feo / o / ary mihetsiketsika haingana mankany amin'ny feo "-ing" amin'ny "miantsena" ohatra: põe (apetraka / apetraka).
Fanazarana ny fanononana Portigey ^
Raha vantany vao fantatrao ny fanononana ny litera, tonga ny fotoana anazarana! Afaka manomboka amin'ny:
Raha te hanonona tsara, miala sasatra, maninjitra ny valanoranonao, avereno aorian'ny fampitaovana feo ampiasainao mafy, ary manitatra ny fanononana anao. Amin'ny fandaniana 5-10 minitra isan'andro hanaovana izany dia ho hitanao faingana ny fandrosoana! Tadidio fa ny tanjona dia ny hampahazava ny tenanao fa tsy hanana fanononana tsara. Arakaraka ny anaovanao fanazaran-tena, arakaraka ny hitenenanao no hanatsaranao ny fiteninao! Ny fitenenana amin'ny fiteny vahiny (tenin-drazan'izy ireo) ary manana lantom-peo kely dia matetika ankasitrahan'ny tompon-tany.
Raha nankafy an'ity lahatsoratra ity ianao ary te hampitombo ny fahalalanao ny Portiogey Breziliana, ireto misy sosokevitra vitsivitsy mety hahaliana anao:
Manomboha manatsara ny Portiogey anao
Te hanatsara ny Portigey ve ianao?
Vaovao tsara voalohany: afaka manampy anao izahay Vaovao tsara faharoa: afaka manomboka maimaim-poana ianao ary izao! Amboary ny fitsapana maimaimpoana anao ary ankafizo ity fomba mahomby ity amin'ny fianarana Portiogey mandritra ny 15 andro.
Ahoana no hitazomana ny haavon'ny teny anglisy… raha tsy manana fotoana hitenenana izany ianao?
feh Tranquillus | Jul 13, 2021 | Ao amin'ny tranonkala |
Ny fianarana miteny fiteny tsara dia tsy toy ny mianatra mitaingina bisikileta: azo hadino izany. Ka ahoana no hihazonanao ny haavonao amin'ny teny anglisy raha tsy matetika ianao no manana fotoana ahafahana mampihatra ny fitenin'i Shakespeare? Na mipetraka irery ianao any amin'ny nosy efitra na any amin'ny tanàn-dehibe, dia nametraka lisitry ny fomba tsotra hitadiavana ambaratonga tsara amin'ny teny Anglisy… tsy misy ezaka be loatra.
Ireo torohevitra rehetra ireo dia mihevitra fa afaka niteny anglisy tsara ianao tamin'ny fotoana sasany tamin'ny fiainanao. Izany hoe, mahazo aina ampy hahafantarana mpiteny anglisy sy hamaliana azy nefa tsy mitady ny teninao mandritra ny fifanakalozan-kevitra, na fiainana andavanandro izany na lohahevitra somary sarotra. Raha mahay manoratra ny tantaram-piainanao amin'ny teny Anglisy ianao dia afaka miteny anglisy tsara. Ary ity, na dia tsy azonao atao aza ny mandroso ny resipeo ratatouille satria tsy fantatrao ny anaran'ny anglisy amin'ny fangaro rehetra (baranjely, zucchini, voatabia, tongolo gasy, dipoavatra maitso, dipoavatra mena, dipoavatra, sira, 'bouquet garni').
Ity misy lisitra iray saika feno amin'ny fomba rehetra hitazomana ny haavon'ny teny Anglisy anao, na koa ny fampiroboroboana ny voambolanao raha toa ianao ka miezaka mikaroka rakibolana amin'ny teny sy fitenenana izay tsy azonao.
1. Misoratra anarana amin'ny magazina / gazety / gazety amin'ny teny anglisy
Rehefa miditra amin'ny fianarany nahazo diplaoma izy ireo dia matetika no amporisihina ny mpianatra frantsay hisoratra anarana amin'ny magazine Time. Hevitra tsara; saingy mazàna izy ireo mandao ny famakiana isan-kerinandro noho ny tsy fahampian'ny fotoana, na ny tsy fahampian'ny faniriana. Indrindra fa ny fotoana indraindray dia mety ho sarotra be, ary na dia ny mamaky aza.
Koa misorata anarana amin'ny magazina, gazety na gazety kely fotsiny aza izay tena mampihetsi-po anao - na sakafo, lalao video, zaridaina, vola na cryptocurrency. Tsy hihazona ny haavon'ny teny Anglisy anao fotsiny ianao raha tsy mila ezaka be loatra, fa ho fanampin'izany, hanangona voambolana teknika izay ilaina amin'ny fiainanao matihanina ianao.
2. Miaraha miasa amin'ny mpandahateny anglisy araka izay tratra
Mora kokoa noho ny vita ny hoe, ny manodidina ny mpandahateny anglisy dia tsy isalasalana fa ny fomba tsara indrindra hitazonana ny haavon'ny teny anglisy. Azonao atao ny misoratra anarana amin'ny fihaonana, mampiantrano olon-tsy fantatra amin'ny alàlan'ny Couchsurfing, lasa mpandroso sakafo kafe any amin'ny faritra fizahan-tany, sns.
3. Fitsangatsanganana / an-tany hafa / mandray WHV any amin'ny firenena miteny anglisy
Ireo izay latsaky ny 35 taona dia afaka mahazo tombontsoa amin'ny Working Holiday Programme (WHP) - fehezan-dalàna mamela azy ireo handeha any ivelany hivezivezy sy hiasa miaraka. Ny Francophones dia afaka mandany iray na roa taona any amin'ny firenena enina ambin'ny folo: Australia, Canada, New Zealand, sns.
4. Soraty amin'ny diary anglisy ny diarinao
Ireo izay mitazona diary (na diary) dia tsy maintsy manoratra ny naotiny amin'ny teny anglisy mba hitazomana ny haavon'ny teny anglisy, na dia pejy iray isam-bolana fotsiny aza.
5. Manorata memo, lisitra fiantsenana ary lisitra tokony hatao amin'ny teny anglisy
Tahaka ny toro-hevitra teo aloha, ny fomba mora foana hitazonana ny haavon'ny teny Anglisy anao dia ny fanoratana ireo zavatra kely isan'andro amin'ny fitenin'i Shakespeare: lisitra fiantsenana, lisitra tokony hatao, lisitra tokony hatao, lisitra tokony hatao. '' miaraka aminao amin'ny faran'ny herinandro na fitsangatsanganana sns. Noho io fikafika io dia tsy mila miahiahy intsony ianao amin'ny fampitana ny resipeo ratatouille amin'izao tontolo izao.
6. Jereo ny sarimihetsika sy andian-tantara amin'ny teny anglisy hitehirizana ny haavon'ny teny Anglisy anao
Ny fijerena horonantsary na andian-tsarimihetsika amin'ny endriny voalohany dia iray amin'ny fomba mahazatra indrindra hitazonana ny haavon'ny anglisy.
7. Mamaky tantara sy sanganasa amin'ny teny anglisy
Ireto misy boky vitsivitsy izay atolotray anao hamaky amin'ny 2019.
8. Miresaha amin'ireo tranonkala fampahalalana miteny anglisy isan'andro mba hitazomana ny haavon'ny teny Anglisy anao
Raha tokony handeha hamaky Le Monde isan'andro, maninona raha ampitahanao amin'ny mpamaky dailies amin'ny teny anglisy toy ny New York Times, Politico na Guardian ny famakinao? Tsy ianao ihany no hanangona voambolana sy fomba fiteny, fa ambonin'izany rehetra izany dia hanana fomba fijery hafa amin'ny vaovao ianao noho ny fijerin'ny haino aman-jery frantsay-frantsay.
9. Mihainoa podcast na audiobook amin'ny teny anglisy
Ny podcast dia hatezerana avokoa, ary amin'ity lahatsoratra ity izahay dia manome anao lisitr'ireo podcast tsara indrindra hohenoina amin'ny teny anglisy.
10. Apetraho amin'ny teny anglisy ny kaontinao / solo-sainao / Facebook
Ny fanovana ny fiteny amin'ny telefaonao, ny solosainao, ny kaontinao Facebook, na ny filalaovana lalao video amin'ny teny anglisy, dia ahafahanao mifandray amin'ny teny anglisy amin'ny vidiny ambany kokoa. Ity fikafika irery ity dia tsy ampy loatra hitazomana ny haavony.
11. Henoy ny radio amin'ny teny anglisy
Aza adino: tsy ny fihainoana podcast no resahina. Ny fihainoana ireo radio miteny anglisy, mivantana, amin'ny Internet na amin'ny radio anao, dia fomba iray mahomby indrindra hitazonana ny haavon'ny teny anglisy ho anao (satria afaka manao zavatra hafa miaraka amin'izay ianao) ary mazoto (raha mifantoka amin'ny farafahakeliny fihainoana izay voalaza fa tsy ny radio ho feo tsotra ao ambadika). Raha tsy azonao ny zava-drehetra (na voalohany aza), dia ara-dalàna tanteraka izany. Mandritra ny volana maro dia ho tsapanao fa mihena ny ezaka ataonao mba tsy hahatakaranao izany ary hihatsara tsikelikely aza ny haavon'ny teny anglisy!
Ny BBC sy Voice of America no onjam-peo malaza indrindra, saingy misy tapitrisa hafa.
12. Misoratra anarana amin'ny fantsona Youtube / pejy FB / kaonty Instagram & Twitter
Amin'ity lohahevitra ity dia azonao atao ny mamaky ny lahatsoratray amin'ny fantsona Youtube tsara indrindra.
13. Mitadiava mpanao gazety miteny anglisy
Ny fitadiavana penpal na mpanao gazety miteny anglisy dia mora be amin'ny Internet ankehitriny. Misy tranokala marobe toa an'i PenPal World na Mylanguageexchange - fa raha mila penpal "tena izy" ianao, izany hoe olona iray hifanakalo taratasy taratasy tena izy nalefan'ny paositra, fa tokony hitodika any amin'ny andrim-panjakana antsoina hoe International Pen Friends.
14. Manome vahiny amin'ny Couchsurfing
Tsotra ny fitsipiky ny Couchsurfing: mampiantrano vahiny tsy fantatra ao an-trano, raha mbola tianao. Ireo fitsidihana ireo dia saika matetika fotoana iray hifanakalo sakafo, hetsika, fitsidihana, fotoana iray miaraka amin'ny olona manerana an'izao tontolo izao.
15. Zatra mianatra mianatra teny voambolana folo isan'andro mba hitazomana ny haavon'ny teny anglisy
Fahazarana mitaky fifehezana lehibe, saingy mamela anao hihazona ny haavon'ny teny anglisy anao ary koa hanatsara ny fahalalanao ilay fiteny.
16. Mianara tononkalo isan-kerinandro
Toa an'i François Mitterand, ny fianarana tononkalo tsindraindray isan-kerinandro dia fampihetseham-batana tsara hampiasana ny fitadidianao. Ny fanaovana izany amin'ny teny Anglisy dia fanamby mampihetsi-po kokoa, satria ireo andininy ianaranao dia ho namana misaintsaina tonga lafatra.
17. Mamaky boky amin'ny fiteny roa
Ny famakiana boky amin'ny teny Anglisy dia fomba iray tsara hitazonana ny haavon'ny teny Anglisy anao. Fa ny famakiana boky navoaka tamin'ny fanontana amin'ny fiteny roa aza dia tsara kokoa, satria ny fandikana dia ahafahanao mampihatra ny fahalalanao ilay fiteny.
18. Manorata tantara fohy ho an'ny ankizy na tantara fohy amin'ny teny anglisy
Raha manana ny fanahin'ny mpanoratra vao misondrotra ianao, ny fanoratana tantara fohy amin'ny teny anglisy dia sady mahafinaritra no fomba tsara hanatsarana ny teny anglisy. Aza mieritreritra tena momba ny kalitaon'ny kalitao: ny zava-dehibe dia ny famoronana tantara, na dia lavitra be aza izany na tsy liana amin'ny masonao!
19. Cooking amin'ny teny anglisy
Ho an'ireo manana ny fanahin'ny mpahandro, ny fahazoana sy handentehana ao anaty boky momba ny resipeo voasoratra amin'ny teny anglisy dia mandaitra amin'ny fitazonana ny haavon'ny teny anglisy iray.
20. Mihirà amin'ny anglisy
Ary farany, ny torohevitra mora indrindra ampiasaina mba hitazonana ny haavon'ny teny anglisy dia ny fihirana. Tandremo anefa: tsy resaka fanosehana ny hira ao am-pandroana fotsiny io, fa ny fitandremana ny teny, ny fahazoana azy, ny fandikana azy, ny fanaovana azy. Rehefa mitadidy hira, mihira azy ireo tsy tapaka, miaraka amin'ny fahatakarana mazava ny lahatsoratra nosoratan'ireo mpanakanto, dia tsy hanana olana amin'ny fitazonana ny teny Anglisy ho amin'ny ambaratonga matanjaka ianao.
Ahoana ny fanoratanao CV tsara amin'ny teny anglisy?
feh Tranquillus | Jul 5, 2021 | Ao amin'ny tranonkala |
Ahoana ny fanoratanao CV tsara amin'ny teny anglisy? Amin'ny fiatombohan'ny taom-pianarana sy ny fanombohan'ny taona vaovao, mpianatra maro no efa mitady fiofanana ho any ivelany, na asa hafahafa hahazoana vola mandritra ny taona banga na taona Erasmus.
Ireto misy torohevitra tsy latsaky ny efatra ambin'ny folo izay hanampy anao hanoratra CV tsara indrindra azo atao amin'ny teny anglisy. Hampitahainay aloha ireo fahasamihafana lehibe 6 izay mety misy eo amin'ny CV frantsay sy anglisy, ary faranana amin'ny toro-hevitra ankapobeny 8 izay mihatra amin'ireo maodely roa ireo.
Ahoana ny fomba hanoratana CV tsara amin'ny teny anglisy?
Ny fahasamihafana lehibe 6 eo amin'ny CV frantsay sy ny CV anglisy
1. Ny "famintinana" manokana
Io no mahasamihafa indrindra ny CV frantsay sy ny CV anglisy: famintinana ny mombamomba ny mpifaninana aminao, ao amin'ny fehintsoratra fampidirana, eo an-tampon'ny CV anao.
Ity no faritra manan-danja indrindra amin'ny CV anao amin'ny teny Anglisy satria izy no voalohany (ary indraindray ihany no) zavatra vakin'ny mpikarama iray. Tokony ho afaka hisongadina ianao, hampiseho ny antony manosika anao, hampiditra ny tenanao amin'ny asa sy ny ekipa, ary hanasongadinana ny fahaizanao ... Rehefa roa na telo no misy azy.
Ohatra iray amin'ny tolotra asa amin'ny teny anglisy:
Mpitantana tetik'asa efa za-draharaha miaraka amin'ny traikefa IT lehibe. Ny fahaiza-manao dia misy ny tambajotra informatika, ny fisainana an-tsaina ary ny famahana olana mamorona. Afaka mampihatra ny hevitry ny serivisy ho an'ny mpanjifa amin'ny IT hanatsarana ny traikefan'ny mpampiasa ho an'ny mpanjifa, ny mpiasa ary ny fitantanan-draharaha.
2. Ny maha-zava-dehibe ny traikefa matihanina sy manokana
Tsy toa an'i Frantsa, ny firenena Anglo-Saxon dia manome traikefa matihanina sy manokana fa tsy diplaoman'ny oniversite sy titre.
Noho izany ny traikefa matihanina no ho faritra lehibe indrindra amin'ny CV anao, izay hanomezanao antsipiriany ny asanao amin'ny endrika manintona sy maharitra. Ity fizarana ity dia tokony hahitana ireto manaraka ireto:
Ny anaran'ny orinasa niasanao ho an'ny Toerana niasanao Ny daty nampiasanao anao Ny anjara andraikitra notanananao, ary koa ny anaram-boninahitra ny famaritana ny asa Ary, ny tena zava-dehibe, lisitra misy fihetsika verbe sy angona fototra, manome antsipiriany momba ny matihanina zava-bita manan-danja indrindra amin'ny fampiharana anao
Noho izany, mba hisongadinana, azonao atao ny mametraka ny angon-drakitra marim-pototra momba ny vokatra matihaninao: fitomboana 83% amin'ny varotra fony ianao mpivarotra, nanoratra taratasy fotsy, sns. Mitandrema mba tsy hanimba ny tsiambaratelo momba ny matihanina izay mety efa naotinao nandritra ireo asa nataonao taloha.
3. Fahaiza-manao malefaka
Ny mampiavaka manokana ny CV amin'ny teny anglisy dia ny maha-zava-dehibe ny fahaiza-manao malefaka, izay raha ny tena izy, ny toetra maha olona dia ilaina amin'ny asa maro samihafa, toy ny fahalalahana, fahalalam-pomba, ny fahaizana mifampiresaka sns.
Fampitandremana: tsy ampy ny mametraka "Leadership" ho an'ny mpandray mpiasa hihevitra anao ho mety ho mpitarika ekipa. Ny fahaiza-manao apetrakao ao amin'ny CV-nao dia tsy maintsy ho voaporofon'ny traikefa mahomby sy voaporofo! Raha milaza ianao fa mahavita mamorona, dia mety ho mandritra ny resadresaka ifanaovan-dresaka iray no angatahin'ilay mpikarama hanonona fotoana iray namoronana anao.
Anisan'ireo fahaiza-manao malefaka lehibe indrindra ny:
Fifandraisana ara-potoana fitantanana faharesen-dahatra fahaiza-miasa
Amin'ity lohahevitra ity dia jereo ny toro-hevitra telo azonay miteny anglisy any am-piasana!
4. Tsy dia zava-dehibe ny diplaoma
Tsy toy ny CV frantsay, ny CV anglisy dia hametraka ny faritra "Fanabeazana" farany, eo amin'ny farany ambany amin'ny CV. Ary matetika, ny mpilatsaka hofidina dia ho afa-po amin'ny fametrahana ny diplaomanany farany, na ny manan-danja indrindra. Ka apetraho fotsiny ny oniversite nahitanao diplaoma, ary koa ny anaran'ny diplaoma avo indrindrao.
Tsy mila apetraka ny licence, ny licence-nao raha manana mari-pahaizana master ianao, ny master anao raha manana doctorat sns. Raha tsy hoe misy ifandraisany izany, raha ohatra ianao dia efa nahazo fiofanana tamin'ny sehatra roa mifameno.
5. Any Etazonia, tsy tokony hatao ny mandefa sary.
Amin'ny ankapobeny, tsy dia fahita firy ny mahita sary pasipaoro amin'ny CV amin'ny teny anglisy. Na izany aza, dia mety mbola misy ifandraisany amin'ny asa toy ny mpandroso sakafo na mpampiantrano.
6. Tolo-kevitra arahin'asa
Ary farany, ny mampiavaka ny CV amin'ny teny anglisy indraindray, dia ny fisian'ny tolo-kevitra arahin'asa. Eny tokoa, ao amin'ny fizarana "Experience" dia mety misy ifandraisany ny fametrahana ny anarana, ny adiresy mailaka ary ny nomeraon-telefaona olona iray izay hanaiky ny hanamarina ny fahaizanao sy ny toetranao.
Mety ny sefonao taloha, ny mpitantana anao taloha, ny mpampianatra oniversite, ny mpanazatra ara-panatanjahantena anao, na iza na iza mifandraika amin'ny asanao ho avy.
Aza adino ny mampahafantatra an'ireo olona ireo fa nametraka ny anarany sy ny fifandraisan'izy ireo tao amin'ny CV ianao, raha tsy izany dia ho gaga tsy ampoizina ianao ...
Izay tsy miova: toro-hevitra 8 hanoratana ny CV amin'ny teny Anglisy
Inona no tsy miova? Zavatra hafa rehetra ! Ireto misy tolo-kevitra ankapobeny momba ny fanoratana CV tsara amin'ny teny anglisy na frantsay:
Mampiasà endri-tsoratra mora vakina, tsy mahafinaritra, ary tsy hidina ambanin'ny 11pt. ​​Mametraha farafahakeliny santimetatra farafahakeliny. Ataovy izay hametrahana toerana fotsy ampy eo anelanelan'ny faritra samihafa amin'ny CV anao. Aza vesatrao ny CV misy endrika na haingo maoderina. Azo atao ny mampiasa loko, fa miambena hatrany. Raha mandefa fampiharana avy amin'ny La Poste ianao na raha manolotra ny CV-nao, dia alao antoka fa pirinty amin'ny taratasy tsara izany, miaraka amin'ny gramaty 80g / m². Mampiasà ranomainty tsara kalitao, na dia midika hoe mandeha amin'ny mpanonta matihanina izany aza, raha tsy angatahina manokana, dia aza andefasana ny CV anao amin'ny endrika PDF Matetika ireo mpandray mpiasa dia mampiasa rindrambaiko hanaparitahana ny laoniny, ary tsy afaka mamaky PDF amin'ny fomba mety io rindrambaiko io. Raha tsy eo am-pikarohana akademika na ara-pitsaboana ianao dia tokony tsy ho pejy iray na roa intsony ny resume. Raha tsy mangataka toerana fitantanana zokiolona ianao, mifikira amin'ny pejy iray hanohizanao. Zava-dehibe ny fampisehoana toe-tsaina synthesie sy fahombiazana.
Ahoana ny fijanonana amin'ny fandikana ny lohanao? - Mieritreritra amin'ny fiteny hafa [VIDEO]
feh Tranquillus | Jona 30, 2021 | Ao amin'ny tranonkala |
Ny fieritreretana amin'ny fiteny hafa ankoatry ny tenin-dreniny dia fanamby rehefa mianatra fiteny vahiny. Raha mbola tsy teo ianao dia ho hitanao fa te handika ny zava-drehetra ao an-tsainao ianao, manomboka amin'ny fiteny kendrenao mankany amin'ny tenindrazanao. Mety handany fotoana haingana izy io, ary tsy dia hahomby! Ka ahoana no ahafahanao misoroka ny fanaovana izany ary hahazo fitoniana sy fahatokisan-tena? Abbe dia mizara fomba azo ampiharina sasany hanampy anao hanomboka hieritreritra amin'ny fiteny kendrenao. Izy koa dia hanome anao torohevitra momba ny fijanonan'ny fandikana an-doha.
Ny torolàlana ho an'ny teny Arabo sy ny fiteniny
feh Tranquillus | Apr 12, 2021 | Ao amin'ny tranonkala |
Rehefa miresaka momba ny fiteny amin'ny ho avy isika dia manentana sinoa, indraindray koa Rosiana, Espaniôla koa. Mahalana ny Arabo, fiteny iray adino matetika. Saingy tsy mpifaninana matotra amin'ny titre izy? Iray amin'ireo fiteny 5 be mpampiasa indrindra eran-tany izy io. Ny fiteny amin'ny siansa, ny zavakanto, ny sivilizasiona ary ny fivavahana, ny Arabo dia nisy fiatraikany lehibe tamin'ny kolontsaina an'izao tontolo izao. Taona maro isan-taona, mahatoky amin'ny fomban-drazana, mitohy ny dia amin'ny fiteny arabo, manankarena ary manintona. Eo anelanelan'ny Arabo ara-bakiteny, ny fitenim-paritra tsy tambo isaina ary ny abidia mora fantany, ahoana no hamaritanao ny votoatin'ny fiteny sarotra idirana? Mametraka anao amin'ny làlana i Babbel!
Aiza ny fiteny arabo ampiasaina eto amin'izao tontolo izao?
Ny Arabo no fiteny ofisialin'ny firenena 24 ary iray amin'ireo fiteny ofisialy 6 an'ny Firenena Mikambana. Ireo no fanjakana 22 an'ny Ligy Arabo, miampy an'i Eritrea sy Chad. Ny antsasaky ny fanjakana miteny arabo dia any Afrika (Algeria, Comoros, Djibouti, Egypt, Eritrea, Libya, Morocco, Mauritania, Somalia, Sudan, Chad ary Tunisia). Ny antsasany hafa dia any Azia (Arabia Saodita, Bahrain, Emira Arabo Mitambatra, Irak, Jordania, Koety, Libanona, Oman, Palestine, Qatar, Syria ary Yemen).
Arabo, Tiorka, Persiana ... andao haka sary! Ny ankamaroan'ny miteny Arabo dia Silamo - ary ny Arabo no fitenin'ny Kôrana - fampiraisana iraisana dia ny fanakorontanana ny fiteny Arabo amin'ny Silamo. Ny firenena Silamo lehibe indrindra eto an-tany anefa dia tsy miteny Arabo satria Indonezia no izy. Ny Arabo dia fiteny Semitika. Mifanohitra amin'ny eritreritry ny besinimaro, tsy misy ifandraisany amin'ny Tiorka ny fianakavianany - izay ao anatin'ny vondrona fiteny Altaika. Persian na Farsi, fiteny voalohany any Iran, dia tsy misy ifandraisany amin'ny Arabo. Ity dia fiteny Indo-Eoropeana… ​​toa ny frantsay! Toy izany koa, any Afghanistan, ny fiteny roa an'isa dia fiteny iraniana: Dari sy Pashto. Ny fampiharana ny teny Arabo dia any amin'ny vitsy an'isa any, any ambadiky ny Ozbeky na Turkmen. Natokana ho an'ny fivavahana sy ny varotra ivelany miaraka amin'ny Moyen Orient izy io.
Tao Babbel, izahay dia lasa nahazatra ny manazava ny rafitry ny fanoratana. Ny abidia Cyrillic dia tsy mila mianatra mihoatra ny roa andro. Ny fitsidihanay izao tontolo izao abidia dia nitondra anay avy tany Kaokazy nankany amin'ny saikinosy Koreana. Raha ny abidia Arabo… dia tsy abidia amin'ny heviny izay ahaizantsika azy amin'ny abidia latina! Antsoina hoe abjad na abidia consonantal, ny abidia arabo ihany no manamarika renisoratra. Voasoratra ary vakiana miankavanana sy miankavia ary misy litera 28.
Ity rafitry ny fanoratana ity dia hita amin'ny fiteny hafa, indrindra ny Persiana, Kiorda ary Urdu. Hatramin'ny taona 1000 dia nampiasain'i Uyghurs ihany koa. Hatramin'ny taona 1928, dia fandikana amin'ny teny Tiorka izay efa nampiasa kinova abidia latina izy io.
Arabo ara-bakiteny sy Arabo mifampiresaka
Azo antoka fa ny teny arabo no ohatra tsara indrindra amin'ny diglossia. Diglossia dia ny fizarana ny fiteny amin'ny karazany isam-paritra, izay tsy takatry ny saina indraindray. Ny Arabo, amin'ny maha-fiteny azy, dia afaka manondro zava-misy roa samy hafa: ny Arabo ara-bakiteny amin'ny lafiny iray, ny Arabo dialectal amin'ny lafiny iray.
Ny Arabo ara-bakiteny no anarana nomena ilay fiteny namboarina. Teny fitantanana sy politika, io no ekena ho fiteny ofisialin'ny firenena miteny arabo. Io koa no hitantsika ao amin'ny Kôrana, amin'ny haino aman-jery ary amin'ny fitsipi-pitenenana mazava tsara. Manjaka amin'ny fifandraisana an-tsoratra sy ofisialy, amin'ny fivavahana ary amin'ny fifanakalozana iraisam-pirenena. Fa raha ny tena izy dia tsy misy manana Arabo klasika ho tenin-drazany. Ny Arabo Dialectal no fiteny ampiasaina am-bava amin'ny fiainana isan'andro. Samy hafa be ny endriny amin'ny faritra iray.
Fa maninona no diglosia? Io dia vokatry ny fivoarana ara-tantara, ara-tsosialy ary ara-politika. Toy ny fiteny velona rehetra dia miova ny Arabo rehefa mandeha ny fotoana. Teny poetika lasa fiteny ara-pinoana nanomboka tamin'ny taonjato faha-XNUMX, nandresy faritany midadasika misy fitaomana isan-karazany. Ireo fitenim-paritra taloha, izay tsy nanjavona tanteraka, dia nifanaraka mba hifangaro amin'ny Arabo. Coptic any Egypt, Berber in the Maghreb, Aramaic in Syria… Ny tantaran'ny fiteny Arabo dia tantaran'ny fifindra-monina sy ny harenan'ny kolontsaina. Andao hojerentsika ireo fitenim-paritra arabo lehibe.
Inona avy ireo lohateny lehibe amin'ny teny arabo?
Ny fanavahana ny dialectal ny Arabo dia atao amin'ny ambaratonga maro. Ny mpandinika ny fiteny dia nanohana ny fomba fanao isaky ny faritra. Hisy arabo tandrefana mifanohitra amin'ny arabo atsinanana. Fa na dia ao anatin'ny faritra misy azy aza dia misy fahasamihafana maro. Hatramin'ny indraindray nandao ny fanasokajiana ho amin'ny tenim-paritra mankasitraka ny teny fiteny.
Arabo Andrefana sy Arabo Atsinanana
Ny Arabo Andrefana, na Arabo Maghrebiana, dia manondro ny karazan-teny misy ankehitriny - amin'ny filaharam-paritany faritany - any Algeria, Libya, Morocco, Mauritania ary Tunisia.
Amina fanesorana, ny faritany miteny Arabo hafa rehetra dia mifamatotra amin'ny Arabo Atsinanana. Azontsika atao ny manavaka ny lafiny fiteny efatra izay:
- Arabo egyptiana;
- Arabo Mesopotamia, indrindra any Iràka;
- Arabo Levantine, any Syria, Libanona, Palestine ary Jordania;
- Arabo Peninsular, mahazatra an'ireo Fanjakana miteny Arabo hafa ao amin'ny Saikinosy Arabia.
Tenim-paritra arabo: ohatra vitsivitsy
Amin'ny teny Arabo Alzeriana, ny tenin-dreny misy mpandahateny manodidina ny 40 tapitrisa, misy zanapeo sasany manjavona. Ohatra, ny teny سماء (s'ama, lanitra) dia tononina hoe s'ma. Mifanohitra amin'izany, ny Arabo Syriana dia mijanona ho mahatoky kokoa amin'ny teny Arabo ara-bakiteny amin'ny fanononana azy. Sary iray hafa: كيفاش؟ (kifach, ahoana?),, و (weqtach, rahoviana?) ary ny fironana hanampy -ach amin'ny faran'ny teny fakana am-bavany amin'ny teny Arabo Alzerianina sy Arabo maraokana. Any Libanona na i Egypt, ny mifanitsy no atao hoe kif.
Inona no atao hoe arabizi?
Porofo fa ny fivoaran'ny teny Arabo dia mbola lavitra, fiteny vaovao nipoitra tamin'ny taona 1990. Izy io dia momba ny Arabo, izay azo heverina ho fampifangaroana ny Arabo sy Anglisy (inglizi amin'ny teny Arabo) toy ny Frenglish, na ny fihenan'ny ny teny Arabo ary mora. Ny tsy fisian'ireo kitendry Arabo tamin'ny telefaona finday voalohany dia nahatonga ny fanoloana ireo tarehintsoratra tsy hita isa. Ny litera "ء" lasa 2, ny "ع" lasa 3 na ny "ح" dia lasa 7. Tranga iray izay manjary manjavona ankehitriny fa izay mbola hita ao amin'ny tambajotra sosialy.
Raha ny fanazavana, inona no tena dikan'ny hoe "fiteny roa"?
feh Tranquillus | Feb 16, 2021 | Ao amin'ny tranonkala |
Fantatrao ve fa ny antsasaky ny mponina manerantany dia mihevitra ny tenany ho fiteny roa? Ity tarehimarika ity, izay toa toa nahagaga raha vao jerena, dia nasongadin'ny fikarohana momba ny fiteny roa nataon'i Ellen Bialystok, psikology ary profesora kanadiana ao amin'ny University York ao Toronto.
Taorian'ny nahazoany ny mari-pahaizana doctorat tamin'ny taona 1976, miaraka am-pahaizana manokana amin'ny fivelarana kognitika sy ny fiteny amin'ny ankizy, ny fikarohana nataony avy eo dia nifantoka tamin'ny fiteny roa, hatramin'ny fahazazany ka hatramin'ny antitra indrindra. Miaraka amin'ny fanontaniana afovoany: misy fiantraikany amin'ny fizotran'ny kognitika ve ny fiteny roa? Raha eny, ahoana? Ireo ve dia mitovy ny fiatraikany sy / na ny vokany miankina amin'ny atidohan'ny zaza na an'ny olon-dehibe? Ahoana no hahatonga ny ankizy ho lasa fiteny roa?
Raha mianatra fiteny miaraka amin'i Babbel ianao, dia azo antoka fa manonofinofy ny hahafahanao mandingana ny lesonao rehetra ary miaraka amina fakantsary iray amin'ny rantsan-tànanao lasa fiteny roa. Mampalahelo fa tsy azo atao izany!
Mba hahazoana famelan-keloka, omenay anao ato amin'ity lahatsoratra ity lakile vitsivitsy hahalalana ny tena dikan'ny hoe "fiteny roa", inona ireo karazana fiteny roa ary angamba, mitaona anao hanatsara ny fahombiazan'ny fianaranao amin'ny fiteny.
Inona avy ireo karazana fiteny roa?
Inona no tena dikan'ny hoe fiteny roa? Ny olona iray dia holazaina amin'ny fiteny roa raha afaka mifampiresaka amin'ny fiteny roa izy, na amin'ny endrika mavitrika (miteny, manoratra) ary amin'ny endrika mandalo (mihaino, mamaky). Na izany aza, mifanohitra amin'ny eritreritry ny besinimaro, ny olona miteny roa dia tsy voatery ho ambony amin'ny fiteny roa. Matetika io no tranga misy amin'ireo ankizy miteny roa avy amin'ny fiaviana mpifindra monina izay hampiasa mora kokoa ny fiteny ampiasaina amin'ny fianarany mba hiresaka lohahevitra misintona (zavakanto, filozofia sns.).
Ary koa, na dia misy karazana fiteny roa samy hafa aza dia tsy tokony hafangaro amin'ny fahaizany miteny fiteny "tsara" izy ireo. Ny fianarana miteny anglisy mahay Babbel dia azo atao mora foana: mitaky tsotra fotsiny ny fahaizana mifandray amin'ity fiteny ity, na dia misy lesoka vitsivitsy aza.
Fomba 5 hampiasa fiteny roa ...
Ny taonan'ny fahazoana fiteny dia mitana andraikitra lehibe amin'ny fiteny roa ampiasain'ny olona iray. Misy karazany dimy ny fiteny roa:
Bilingualisme voalohany miaraka: mianatra fiteny roa hatramin'ny nahaterahany. Izany no tranga ho an'ireo olona manana ray aman-dreny roa manana tenim-pianakaviana roa samy hafa.
Bilingualism voalohany nisesy: fianarana ampahany amin'ny fiteny iray hatramin'ny nahaterahany, alohan'ny hianarana fiteny faharoa hatramin'ny fahazazany. Izany no toe-jaza izay, ohatra, dia karakarain'ny mpitaiza miteny vahiny.
Fahaiza-miteny roa farany: mianatra fiteny faharoa amin'ny taona 6, amin'ny tenindrazana.
Bilingualism fanampiny: fanatontosana ny fiteny roa amin'ny alàlan'ny fampianarana amin'ny fiteny.
Fomba fiteny roa manintona: mianatra fiteny faharoa manimba ny voalohany.
... ho an'ny diplaoma amin'ny fiteny roa
Miaraka amin'ireo fomba dimy hahatongavana amin'ny fiteny roa ireo, misy ambaratonga dimy fifehezana ny fiteny roa:
Ny fiteny roa "marina": fifehezana lafatra ny fiteny roa, fahaizana maneho ny tenany amin'ny fisoratana anarana rehetra, amin'ny lohahevitra rehetra.
"Semi-linguism": haavon'ny fahalalana ny fiteny roa mitovy, na dia samy tsy voafehin'ny fiteny iray aza. Izany no izy, ohatra, ny ankizy mianatra fiteny roa miaraka.
"Equilingualism": ny fahaiza-mandanjalanja amin'ny fiteny roa tonta amin'ny fomba mitovy, tsy tonga amin'ny haavon'ny mpandahateny teratany.
Diglossia: fampiasana ny fiteny tsirairay amin'ny sehatra manokana. Any Paraguay, mahazatra ny mihaona amin'ireo olona miteny Guarani (ampiasaina amin'ny fiainana andavanandro, miaraka amin'ny fianakaviana, namana, mpiara-miasa ...) ary Castilian (ampiasaina any am-pianarana, amin'ny fifandraisana ara-pitantanana, amin'ny rafitra ara-dalàna…). Ny fiteny isam-paritra toa ny Occitan, Basque, na Breton dia mety iharan'ny diglossia ihany koa.
Fomba fiteny roa: mahay teny iray nefa tsy mahay miteny azy. Ity no trangan'ny mpanoratra ireto andalana ireto, afaka mahatakatra tsara an'i Khmer am-bava nefa tsy mahay miteny, mamaky na manoratra azy.
Ny vokatry ny fiteny roa ao amin'ny ati-doha
Hatramin'ny antenatenan'ny taonjato faha-XNUMX, ny fiteny roa dia nampangaina tamin'ny zava-dratsy rehetra: tompon'andraikitra amin'ny ankizy misavoritaka, manemotra ny fivelaran'ny kognita, manakana ny fahombiazan'ny akademika sy ny fandrosoana ara-tsosialy ...
Vakio ao amin'ny magazain'i Babbel: ahoana ny fahitan'ny fiteny roa ahy very saina!
Androany, manaiky ny rehetra fa tsy miteraka fiatraikany ratsy ny fiteny roa. Miorina manokana amin'ny fikarohana nataon'i Ellen Bialystok, afaka manavaka ny vokany telo lehibe amin'ny fiteny roa ao amin'ny ati-doha isika.
Ny vokany tsara
Misy vokatra telo lehibe azo avy amin'ny fiteny roa.
- Manemotra ny soritr'aretin'ny dementia sy ny aretin'i Alzheimer
Ny iray amin'ny fanadihadiana nataon'i Ellen Bialystok dia nijery olona 450 voan'ny aretin'i Alzheimer, izay samy nanana ny soritr'aretina mitovy tamin'ny fotoana nahitana azy. Ny antsasaky ny santionany dia olona mampiasa fiteny roa, izay miteny mavitrika fiteny roa farafaharatsiny eo amin'ny fiainany.
Ny fikarohana nataony dia naneho fa ireo marary amin'ny fiteny roa dia nanomboka niaina soritr'aretin'ny aretina efatra ka hatramin'ny dimy taona taty aoriana noho ny monolinguals. Nanatsoaka hevitra izy fa ny fanaovana fiteny roa dia tsy manefy fiarovana amin'ny Alzheimer, fa manome fialan-tsasatra.
Mifanaraka amin'izany ihany, tamin'ny 2013 ny mpikaroka karana Suvarna Alladi dia namoaka fanadihadiana nahitana olona 648, mampiseho valiny mitovy amin'izany.
Ny fanazavana dia ny hoe rehefa mihantitra isika, ny fiteny roa dia hanampy amin'ny fitazonana ny volondavenona sy fotsy, ilaina amin'ny fahaizantsika misaina. Ho fanampin'izany, ny fianarana fiteny iray, na dia efa antitra aza, dia hampitombo ny volondavenona. Ka tsy tara loatra raha manomboka mianatra fiteny miaraka amin'i Babbel!
- atidoha mahomby kokoa
Ny fiteny roa dia matetika nofaritana ho toy ny juggling tsy tapaka amin'ny fiteny roa. Rehefa mahita fiara, dia ny Franco-Espaniola miteny roa fiteny no hieritreritra ny teny hoe fiara sy ny teny hoe carro. Raha miaraka amin'ny frantsay hafa izy dia hiresaka momba ny fiara iray, manakana ny teny hoe carro, izay mbola mijanona eo amin'ny toerana lalina ao an-dohany ihany.
Ny fikarohana nataon'i Ellen Bialystok dia naneho fa ity "circuit double" ity, amin'ny alàlan'ny fiantsoana azy, dia manatanjaka ny rafitra "fanaraha-maso" an'ny ati-doha, toy ny hoe "hozatra" roa tonta ity faritra ao amin'ny taovantsika ity.
Toy izany koa ny atleta miofana izay hahomby amin'ny fampiakarana lanja mavesatra kokoa noho ny olona mahazatra, noho izany, ny olona miteny roa dia omena fiofanana tsara kokoa hanao asa kognitika sasany: manao zavatra maro amin'ny fotoana iray ihany, mamaha ny fifandirana, mivezivezy haingana. iray hafa, manakana ny hetsika.
- Mampivelatra ny fahaiza-mamorona ny fiteny roa
Fanadihadiana marobe ihany koa no milaza fa ny ati-dohan'ny olona miteny roa dia mamorona kokoa noho ny an'ny olona tsy miteny. Ny fandinihana voalohany momba an'io lohahevitra io dia natao tany Quebec tamin'ny 1962, ary nanatsoaka hevitra fa ny fahaizana miteny amin'ny fiteny roa dia manolotra tombony tena izy eo amin'ny sehatry ny kognitika, indrindra amin'ny lafiny fisainana malalaka, fahaiza-mamorona ary fahalalahana. Ny fomba fiasa ampiasaina mandritra ireo fandalinana ireo dia resahina matetika: santionany kely loatra, fitongilanana ivelany, tontolo iainana manana tombony, sns.
Ary farany, misy ny vokany izay tsy miabo na miiba, fa tsy miandany: ny fiteny roa dia ela kokoa vao mifidy ny teny ary tsy hanana voambolana firy. Raha ohatra, ny olona iray miteny roa dia angatahana anarana voankazo betsaka araka izay azo atao, dia haharitra kokoa ny fotoana ahatongavany amin'ny isan'ny voankazo voatonona amin'ny fiteny tokana.
Ity faharetana ity dia tsy ratsy amin'ny tenany. Azo heverina ho karazana fahendrena iray aza izy io, izay tsy ho olon-tsy fantatra ny fianarana fiteny!
Fa maninona no mianatra sinoa?
feh Tranquillus | Feb 3, 2021 | Ao amin'ny tranonkala |
Miaraka amin'ny mpandahateny mihoatra ny 860 tapitrisa eran'izao tontolo izao, dia miteny amin'ny tenanao ianao hoe: maninona raha iray hafa? Te hianatra sinoa ve ianao? Omenay anao eto ny antony rehetra hianarana sinoa sinoa, ary ny torohevitra tsara rehetra hanombohana an'ity fianarana lava sy tsara ity. Fa maninona, amin'ny fomba ahoana ary amin'ny hafiriana no hanazavana anao ny zava-drehetra aminao.
Inona no ho hitanao ato amin'ity lahatsoratra ity?
Fa maninona no mianatra sinoa ankehitriny? ^
Ka mazava ho azy, ny Sinoa Sinoa dia tsy fiteny ekena fa mora ianarana. Izy io aza dia maneho afobe amin'ny fanamby ho an'ny Tandrefana izay te-hanomboka. Ny hetsi-panoherana mbola manome tombontsoa maro ... Ho an'ireo izay tia fanamby dia efa antony tsara hianarana azy io, ho an'ny hafa eto dia misy antony hafa tsara hianarana Mandarin ankehitriny.
Io no fiteny voalohany ampiasaina eran'izao tontolo izao ^
860 tapitrisa mahery ny olona miteny sinoa mandarin eto an-tany. Io no fiteny be mpampiasa sy be mpampiasa indrindra eran'izao tontolo izao. Raha betsaka ny holazaina aminao fa efa antony lehibe ianarana azy io: olona 860 tapitrisa hifandraisana aminy. Miisa 24 ny fitenim-paritra any Shina, miparitaka manerana ireo faritany. Na izany aza, azon'ny ankamaroan'ny mponina ny sinoa mandarin. Voafidy ho fiteny ofisialy voalohany ihany koa ao amin'ny People's Republic of China. Ary raha ny tena marimarina kokoa, Sinoa Mandarin no resahina eto, fa afaka miresaka Mandarin na "Chinese Standard" ihany isika (mazava ho azy io fiteny io!).
Mahasoa amin'ny raharaham-bahiny (sy hanamafisana ny CV anao) ^
China dia mpilalao lehibe amin'ny toekarena manerantany. Ary eo anelanelan'ny manjaka eo amin'ny tsena iraisam-pirenena sy ny isan'ny mpandahateny erak'izao tontolo izao dia lasa mahaliana hatrany izy. Ny fianarana (na fahalalana am-bava na / na an-tsoratra) dia azo antoka fa fananana lehibe amin'ny CV, indrindra eo amin'ny sehatry ny varotra iraisam-pirenena, fizahan-tany, orinasa ... Misy koa ny fanadinana ambaratonga, ny fitsapana HSK. Ekena (ary tadiavina) avy amin'ny matihanina. Mety ho tanjonao voalohany ny handray an'ity fitsapana ity, ary avy eo mahazo asa.
Tandremo anefa, ny fianarana sinoa, raha manampy fotsiny ny andalana "sinoa: ambaratonga tsara" ao amin'ny CV anao dia tsy hanome anao ny antony manosika sy fifehezana ilainao hianarana azy. Tokony hahita antony marim-pototra ianao, hahafahanao mitazona ny antony manosika anao amin'ny ambaratonga avo indrindra mandritra ny fianaranao. Miasa any Sina, manao raharaha miaraka amin'ny Aziatika, miaina amin'ity faritra ity, miasa amin'ny fizahantany any Frantsa miaraka amin'ny fahalalana manokana an'ity tsena ity… antony lehibe! Ny fahalalana Sinoa hametahana tsipika amin'ny CV anao dia tsy antony lehibe.
Ianaro izany amin'ny fahalianana madio amin'ny fiteny sy ny kolotsaina ^
Manankarena ny fiteny sinoa ary ho an'ny maro, mahavariana. Ny fiteny sy ny kolontsaina dia mety ho lasa filan'ny nofo. Ny fahalalana ilay fiteny dia afaka manampy anao hahatakatra bebe kokoa ity kolotsaina ity, hiditra amin'ny sarimihetsika sy boky amin'ny teny sinoa mandarin, fa hahita ihany koa tsaratsara kokoa sy amin'ny fomba miroboka: ny nahandro, ny fitsaboana nentim-paharazana, ny filozofia, ny etika miasa, ny fivavahana na ny haiady ... Raha ianao mafana fo, dia ho voatosika hianatra ianao. Averina indray fa ity dia antony tsara ary antony hitondra anao lavitra amin'ny fianarana.
Tokony ho fantatrao ihany koa fa toy ny fiteny maro hafa, misy teny sy fomba fiteny maro be maneho ny kolontsaina sinoa. Ary mahaliana ny manatona ireo lafin-kolontsaina sinoa ireo amin'ny alàlan'ny asa sorany.
Ahoana ny fomba hianarana sinoa ankehitriny? ^
Mianara Sinoa samirery, amin'ny tenanao ary an-tserasera ^
Fitaovana maro no mamela anao hahay fiteny iray samirery. Mianatra sinoa mandarin koa. Ny fomba izay atolotray amin'ny alàlan'ny tranokalanay, ary amin'ny ankapobeny amin'ny fiteny rehetra, dia azo ampiasaina hianarana ny fiteny Confucius.
Fampiharana hianarana fiteny ^
Ireo rindranasa dia manolotra tombony maro amin'ny fianarana fiteny iray. Azo ampiasaina amin'ny finday izy ireo ary noho izany dia hanaraka anao na aiza na aiza (amin'ny fitaterana, rehefa manao ny fanatanjahanao ianao, amin'ny filaharana fivarotana lehibe…). Mandefa fampandrenesana izy ireo rehefa "mila" ianaranao izay manohy mianatra. Farany, izy ireo dia natao ho mora ampiasaina, azo ampiharina ary mahomby.
Ny fampiharana ny fianarana mandarin avy amin'ny MosaLingua dia ahafahanao mianatra teny sy andianteny, manomboka amin'ny haavo A1 - manomboka - ka hatramin'ny haavo C1 - mandroso. Izy io dia manana karatra voambolana 2000 mahery, miaraka amin'ireo teny sy fomba fiteny mahazatra indrindra. Ny tombony amin'ny fampiharana anay, ankoatry ny fahombiazan'ny fomba, dia mamela anao hianatra voambolana sy ny fanononana azy… izay ahafahanao mifampiresaka “haingana”.
Ny fampiharana Pleco voatonona matetika koa dia fitaovana tsara. Amin'ny rakibolana multifunction io. Azonao atao ny mitady toetra na teny amin'ny teny Pinyin (fandikana fonetika), ary omen'ny fampiharana anao ny toetra, ny dikany, ny fanononana azy, ny andalana ...
Mazava ho azy fa zava-dehibe ny fisafidianana rindranasa izay ahazoanao aina. Fampiharana ahafahanao mandroso, ary tadidio ny tanjonao (na ny serasera, ny fanoratana, ny fitsangatsanganana, ny fitadiavana asa any Shina). Aza misalasala mampitaha ny fampiharana, ny fomba fianarana ary ny atiny. Ho an'izany dia hahita kinova maimaimpoana momba ny rindrambaiko MosaLingua izay anoloranay anao manomboka.
YouTube sy ireo horonan-tsary fanampiana ^
Mpampianatra maro na mpianatra tsotra nianatra irery no namorona fantsona YouTube hanampiana ireo mazoto kokoa hianatra amin'ny alàlan'ny horonantsary. Ny tombony azo amin'ny horonan-tsary dia maro (be dia be, maimaim-poana, manokana), fa ny tombony voalohany dia mamela anao hianatra sinoa am-bava / am-peo / miteny! Sinoa sinoa izay azonao ampiasaina mivantana hifandraisana amin'ireo teratany. Ary raha ny serasera no tanjonao dia mety izany.
Ankoatra ny fanononana sy ny "fitenenana", misy horonan-tsary na fantsona sasany mety hiteraka lohahevitra mahaliana amin'ny fianaranao: voambolana, fampifangaroana sns. Ohatra, mamporisika ireo fantsona izahay:
Aza misalasala mikaroka ireo fantsona mahaliana sy mety indrindra ho an'ny tanjonao samirery, amin'ny alàlan'ny fanoratana fotsiny ao amin'ny bara fikarohana YouTube “mianatra sinoa”.
Tranonkala an-tserasera ^
Raha hanohy ny andalana teo aloha dia fantaro fa ankoatry ny fantsona YouTube, misy sehatra video izay anoloranay anao noho ireo antony ireo ihany. Manokana, azonao atao ny mitsidika ireo tranokala Youku sy Tudou izay hanome anao fidirana amin'ny loharano video maro.
Betsaka ihany koa ireo tranonkala ahafahanao mianatra ilay fiteny, na farafaharatsiny manararaotra ireo loharano izay ilaina amin'ny fianaranao. Voambolana, fitsipi-pitenenana, fampifangaroana, rafitra fanoratana, feo, lesona hafa… Ho hitanao amin'ny tranonkala an-tserasera izay rehetra ilainao. Ny olana dia tsy hianatra fomba iray ianao ary ny coaching indraindray ilaina amin'ny fiteny fantatra fa sarotra. Raha nilaza izany ianao, ity habetsaky ny loharanom-pahalalana azo antoka ity dia fitaovana tena tsara handroso.
Manoro hevitra izahay, ohatra, ny sinoa ho an'ny eropeana (noforonina tamin'ny fisantaran'ny Vondrona eropeana), ny kolotsaina China na koa ny Chine In izay mampianatra lesona maro.
Mianara miaraka amin'ny mpampianatra ^
Araka ny efa hitantsika, ny Internet dia manamora ny fianarana fiteny irery. Na izany aza, ho an'ireo izay mila fanaraha-maso, mba hotarihina amin'ny fianarany dia fantaro fa afaka mianatra Sinoa Mandarin miaraka amin'ny mpampianatra ihany koa ianao. Ireo dia mety ho lesona sinoa an-tserasera na mivantana, amin'ny vondrona na tsirairay. Ity no fomba tsara indrindra raha mahatsapa ianao fa mila coaching handrosoana. Ireo tranonkala toa an'i Preply na Verbling dia mamela anao hankafy lesona manokana amin'ny mpampianatra an-tserasera (amin'ny sarany). Mandroso amin'ny hafainganana ianao ary mahazo tombony ihany koa amin'ny torohevitra tsara omen'ny mpampianatra manam-pahaizana manokana. Ity dia fomba mahomby, fa eto dia mandoa.
Raha hisafidy ny fomba sy ny vahaolana mety aminao, dia miankina amin'ny tanjonao nolazaiko io. Raha te hianatra voambolana ianao amin'ny hafainganam-pandehanao mba handrafetana dia ao anatin'ny herintaona dia azonao atao ny manomboka amin'ny tenanao manokana miaraka amin'ny rindranasa sy loharano azo alaina amin'ny Internet. Raha mila mianatra haingana hihaona amin'ny anjara asa iray ianao, ny voambolana marina ary ny kabary tsara dia fampiasam-bola tsara ny lesona manokana. Na izany na tsy izany, ny mianatra Sinoa Sinoa ary koa mianatra fiteny maro, dia afaka manampy anao ny fampitomboana ny fanohanana sy ny fomba. Handray soa avy amin'ny tsara indrindra amin'ny tsirairay ianao, ary hanitatra ny loharano hananana fahitana feno ny fiteny sy ny kolontsaina sinoa.
Mandra-pahoviana no hianatra sinoa? ^
Ny fanontaniana apetraky ny tsirairay. Ny fifehezana ny sinoa sinoa eo an-tananao, ny feo rehetra, ny fanononana tsara, ny voambolana mety indrindra… azo antoka fa mitaky fotoana. Ary ny làlana ho avy tsy mora ho antsika Francôfônia. Ny lalana mankany amin'ny fifehezana ny Espaniôla dia toa mora kokoa amin'ny sisiny!
Na izany aza, ny fahaizana mifampiresaka amin'ny ambaratonga fototra na antonony amin'ny teny sinoa mandarin dia tsy sarotra izany, ary azon'ny tsirairay atao izany. Avy amin'ireo rehetra manana ny antony manosika, ny finiavana ary ny fomba sy fitaovana mety. Ny fianarana sinoa, toy ny mianatra fiteny hafa, dia miankina amin'ny fanapahan-kevitry ny mpianatra, ny fitaovana sy ny loharano ampiasaina ary ny tsy fitovizany. Ampifanaraho izy telo, dia ho hitanao fa handeha tsara ny fianaranao. Avy eo, haharitra hafiriana? Miankina amin'ny tanjonao sy ny fotoana laninao hianarana azy ary ny fahavononanao io.
Miteny sinoa ^
Fa maninona no mianatra sinoa? Hiresaka, sa tsy izany? Amin'io lafiny io, rehefa mianatra ny teny sinoa ianao (toy ny fiteny hafa, dia tiako holazaina) dia zava-dehibe ny mifantoka amin'ny fahaizany miteny koa. Mitandrema ihany anefa, ny Sinoa Sinoa dia tsy fiteny fantatra fa mora ianarana, indrindra amin'ny fanononana 4-tonony. Saingy, araka ny efa nolazainay tetsy ambony, miaraka amin'ny fomba mety, fitaovana mety hanohanana ny fianaranao sy ny antony manosika anao, tsy misy antony tsy ahafahanao manao izany.
Ny feo ^
Inona avy ireo "tonony" nipoitra? Eny, ny teny mitovy amin'ny sinoa dia mety misy dikany 4 raha hafa ny fanononana azy. Ny ohatra tsara indrindra dia: mā (= maman), má (= hemp), mǎ (= soavaly) ary mà (= ompa). Taratasy roa, teny 4 samy hafa, feo samy hafa 4. Tampoka teo, 1. marina fa ny mampianatra sy miteny sinoa dia mety hampatahotra, fa 2. fantatsika ihany koa ny maha-zava-dehibe ny fanononana tsara na ny tena marina eto. Tena ilaina amin'ny fifandraisana amin'ny teny sinoa.
Ary ny sahan-kevitra ^
Tena ilaina ny feo, fa tsy izy irery no mampita hafatra. Zava-dehibe ihany koa ny tontolon-kevitra. Nolazaiko ny Espaniola tetsy ambony, fa amin'ity lafiny ity dia mitovy ny Sinoa Espaniola sy Mandarin. Eny tokoa, amin'ny Espaniôla, ny mpisolo tena manokana dia tsy ampiasaina: tsy hiteny aho hoe mihinana aho, mihinana ianao, mihinana izy… Hilaza izahay hoe "mihinana, mihinana, mihinana". Io ny sahan-kevitra ahafahantsika mahatakatra izay lazaintsika (sy ny fiafaran'ny verbe). Ho an'ny sinoa eto dia tsy mitovy io: ny teny manodidina no ahafahantsika mahatakatra zavatra maro ao amin'ilay fehezanteny. Tsy fantatrao raha ny soavaly na renin'ilay hoe "ma" henonao? Eny, ampio ny tenanao amin'ny teny manodidina. Toy izany koa, tsy azonao antoka ve ny fampiasana tonony amin'ny Sinoa Sinoa? Aza manahy, ny konteks dia tsy isalasalana fa hamela ny mpiara-miasa aminao hahafantatra ny momba azy.
Fitaovana hanampiana anao hiteny sinoa ^
Raha te hiasa amin'ny fanononana anao, ny feonao ary ny fifandraisana aminao, dia afaka mampiasa fitaovana hafa ianao. Na dia manomboka irery aza io fianarana io.
Misy tranokala manangona sy mifantoka amin'ny firaketana feo ahafahanao mihaino ny fanononana sy ny tonony marina. Manondro manokana ny forvo aho. Mila manorata teny iray fotsiny ianao amin'ny pinyin (fandikana fonetika, ary litera latina) na amin'ny endri-tsoratra sinoa mba hihainoana ny rakipeo noraisin'ireo tompon-tany ao amin'ilay tranonkala.
Ny fangatahanay hianatra sinoa dia manolotra teny voambolana ho anao, ary ny fanononana azy ireo noraketin'ny mpandahateny iray. Mihaino ny teny misy ny feonao sy ny fanononana anao marina.
Ho fanampin'ny tutor manokana dia fantaro fa manana ny mety hihaonana amin'ireo mpiara-miasa amin'ny Internet ifampiresahana ianao. Ireo olona tera-tany te hianatra teny frantsay ohatra ary afaka hiresaka kely amin'ny teny sinoa mandarin ianao ary amin'ny teny frantsay kely. Miresaka fifanakalozana fiteny izahay, ary tena mahaliana ny miasa amin'ny fitenenana am-bava amin'ny fiteny iray. Aza adino ny lahatsoratray mba hahitanao mpanao gazety sinoa.
Fanoratana sinoa ^
Matetika isika no maheno fa, tsotra, Sinoa Mandarin dia tsy misy fampifangaroana, fanambarana na fahasahiranana hafa amin'ity karazana ity. Marina izany, nefa mitandrema: mbola manana olana ihany ny fiteny. Iray amin'izany ny rafitry ny fanoratana, ary maneho fanamby ho an'ny frankofonia izy io. Voalohany dia tokony ho fantatrao fa ny sinoa mandarin dia tsy tena manana abidia. Ny teny tsirairay dia miforona amina litera iray na maromaro antsointsika hoe sinograms (ary azontsika heverina ho toy ny sary ny kolontsaintsika). Ka tsy tokony hianatra abidia isika fa kosa hianatra ireo tarehintsoratra ireo. Soa ihany, misy fitaovana maro be indray misy manampy anao hampihatra an'io lafiny io amin'ny fiteny, na mianatra samirery izany ianao na tsia.
Fitaovana manampy anao hahay hanoratra sinoa ^
Mikasika ny fianarana voambolana dia misy fampiharana ho anao hianaranao endri-tsoratra. Na efa, hahafantaranao tsara ity rafitry ny fanoratana vaovao ity… Raha jerena voalohany dia toa sarotra be ireo litera ireo. Ho fanampin'izay, tsy maintsy mianatra ny dikany ianao fa koa ny fanononana, ary mahafantatra sy manoratra azy ireo. Tsy tsotra izany.
Na izany aza, fitaovana maro no mamela anao hiatrika io fahasahiranana io.
Ny fampiharana Skritter (amin'ny teny anglisy) dia notoroana hevitra taminay imbetsaka. Izy io dia fampiharana iray izay mampiasa, toa an'i MosaLingua, ny rafitra famerimberenana elanelana manampy anao hianatra litera, hahafantatra azy ireo, hanonona azy ireo ary hanoratra azy ireo.
Chineasy dia fampiharana iray hafa izay mampifandray pictograms sy sinograms mba hahatonga ny fahatsiarovanao ny maso hitadidy, ary hanampy anao hianatra litera.
Azonao atao koa ny mahita fampiharana hafa amin'ny alàlan'ny fanoratana ny "fanoratana sinoa" na "fanoratana sinoa" amin'ny iTunes na Google Play.
Indray mandeha indray, ny tranonkala kolontsaina Chine dia manankarena loharanon-karena, fitaovana ary fanazaran-tena manampy anao hianatra ilay fiteny. Araka izany dia hahita lesona maromaro mifantoka amin'ny fanoratana sinoa ianao. Toa an'ity iray ity, misy tranokala maro izay manampy anao hahafantatra tsara kokoa ary avy eo mampihatra ny fanoratana sinoa.
Ny tranokala Chine Nouvelle, ohatra, dia manome anao rakitra (maimaim-poana) miaraka amin'ny fanazavana ny tarehin-tsoratra, ary izay mampiseho aminao ny fomba fampiasana azy ireo tsara.
Mitandrema ihany, na dia zava-dehibe sy mahaliana aza ny fianarana sinoa, dia tsy tokony ho voafetra amin'izany ny fianaranao. Averinay ihany: ny fifandraisana am-bava dia tena zava-dehibe mba hifandraisana. Aza mifantoka amin'ny teny voasoratra fa mahita ny fandanjana mety eo anelanelan'ny soratra sy am-bava.
Izany no hianarana Sinoa Mandarin. Mazava ho azy, ho hitanao ny lohahevitra amin'ny fianarana sinoa mety hahaliana anao eo amin'ny tranokalanay. Manasa anao izahay hitsidika ny sokajy sinoa ao amin'ny tranokalanay. Farany, manasa anao izahay hijery ny pejin'ny loharanom-pahalalana sinoa. Ary aza misalasala manontany anay ny fanontanianao rehetra eto! Tsara ny famakiana ity lahatsoratra ity hatramin'ny farany. Ahoana ny hevitrao momba izany? Avelao izahay hanoratra, fa handrisika anay hanoratra lahatsoratra bebe kokoa
5 / 5 (fifidianana 1)
Tianao ve ity lahatsoratra ity? Midira amin'ny klioba MosaLingua maimaim-poana
Olona maherin'ny 3 MILLION no mahazo tombony amin'izany, maninona ianao? Maimaimpoana 100%:
Atombohy ny fianaranao sinoa sinoa
Te hianatra sinoa sinoa ve ianao?
Vaovao tsara aloha: Afaka manampy anao izahay Vaovao tsara faharoa: afaka manomboka maimaim-poana ianao izao! Ampandehano ny andranao maimaimpoana ary ankafizo ity fomba mahomby ity amin'ny fianarana Sinoa Mandarin mandritra ny 15 andro.
Flashcards hianarana voambolana, horonan-tsary amin'ny kinova am-boalohany misy dikanteny, boky audio, lahatsoratra mifanaraka amin'ny haavonao: manome anao ny fidirana amin'izany rehetra izany ny tranokala MosaLingua, ary maro hafa! Manomboha dieny izao (maimaim-poana ary tsy misy atahorana).
Lahatsoratra mety hahaliana anao: